တစ်ကိုယ်ရေအသာဖြေ - Owl Myanmar News
OM | May 12, 2021 | Uncategorized | No Comments
ကျွန်မဘဝရဲ့ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ခြင်း, ဆန္ဒတွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်း, မှားမှန်းသိပေမယ့် ဆက်တိုးသွားခြင်နေမိခြင်း များဖြင့် ရောထွေးနေသော စိတ်အာရုံကို ဖြစ်ပေါ်သွားစေသည်မှာ လွန်ခဲ့သောဆယ့်ငါးနှစ် ခန့်ကြာသောကာလမှ စတင်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်မဘဝရဲ့အိမ်ထောင်ရေး အထီးကျန်ဆန်လှသော ကာလများမှာ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်ငါးရက်မှ ရှေ့သို့ရေတွက်ခဲ့လျှင် သုံးနှစ်နီးနီးခန့်ပင် ရှိလောက်ပါပြီ။အသက်အားဖြင့် သုံးဆယ့်ရှစ် နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ကျွန်မ ” မနီနီထွန်း ” သည် လင်ရှိမယားတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သားသမီးတော့မရှိသေးပေ။ ကျွန်မထက် အသက် ခြောက် နှစ်ခန့်ကြီးသော ကျွန်မယောကျာ်း ” ကိုတင်ထွန်း ” နှင့် လက်ထက်ခဲ့သည်မှာ ရှစ် နှစ်တာကာလကြာခဲ့လေပြီ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အပျော်မက်လွန်းသော ယောကျာ်းသည် အိမ်ထောင်ကျကာစ ငါး နှစ်အတွင်းလောက်ကတော့ ကျွန်မအတွက် ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုကို ပေးသည်။
အားရင်အားသလို ကျွန်မကို ပွေ့ဖက်, ပွတ်သပ်သည်။ ကာမစပ်ရှက်ခြင်းကို တစ်ပတ်ကို ဆယ် ကြိမ်ခန့် ပုံမှန်နေဖြစ်သည်။ လုပ်သည့်အကြိမ်တိုင်းတွင်လည်း သူပြီးကိုယ်ပြီး အမြဲတမ်းပင်, ကျွန်မတို့ကလေးမရပေမယ့်လဲ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ ခုနောက်ပိုင်း သူ့အသက် လေးဆယ့်နှစ် ကျော်မှစကာ ကျွန်မကို ဂရုစိုက်မှု လျော့နည်းလာသည်။ အပြင်မိတ်ဆွေများနှင့် ပျော်တတ်လာပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ကျွန်မကို ဂရုစိုက်မှု သိသိသာသာလျော့နည်းလာကာ ကာမကိစ္စကို တပ် တစ်ကြိမ်ပင် မမှန်တော့, ကျွန်မ ဆန္ဒရှိနေလို့ သူ့ကိုဆွလျှင်တောင် သူ့လီးမှာ သိပ်မတောင်ချင်, ဇွတ်ဆွပေးလို့တောင်လာလျှင်လည်း ကျွန်မကသာ အပေါ်က အမြဲတမ်း တက်ဆောင့်ပေးရသည်။ သူ၏ အားစိုက်မှုမှာ လုံးဝမရှိတော့, ခဏတိုင်း ကျွန်မဆောင့်ပေးနေရင်း သူ့လီးမှာ ပျော့ညှိုးသွားသည်မှာ အကြိမ်ကြိမ်ပင်။ ကာမကိစ္စကို ကျွန်မ မပြည့်ဝပေမယ့် သူ့လီးသည် အပြင်အပေါင်းအသင်းများနှင့် မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးများ ထိတွေ့နေသည်ဆိုသော သတင်းများလည်း ကျွန်မ သိသိလာပြီ။
အချုပ်ဆိုရသော် သူ့လီးသည် ပန်းမသေပါ, ကျွန်မအပေါ်ထားသော အာရုံတော့သေသွားပြီဟု ကျွန်မ သုံးသက်မိသည်။ ထိုစဉ်ကာလမှစ၍ အိပ်ခန်းထဲရှိ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့တွင် ဘေးတစောင်းရပ်ကာ အထက်ဆံပင်မှစ၍ အောက်ခြေထောက်အဆုံး နေ့တိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာပြန်ကြည့်မိသည်။ ညနေဆိုင်သိမ်းပြီး အိပ်ခန်းထဲကမှန်ရှေ့စရပ်လျှင် ပထမ နေ့ခင်းအလုပ်ချိန်ဝတ်ထားသော ဝမ်းဆက်အရောင် ထမိန်စကက် စကက်ဒူးအပေါ်အတိုတို့ဖြင့် စမတ်ကျလှသော ကျွန်မပုံစံကို ဆယ်မိနစ် မိနစ်ခန့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ညနေခင်း ရေချိုးတော့မှာမို့အဝတ်အစားများကို အထက်ကနေ ချွတ်ချလိုက်ပြီး မိမိရင်သားကို သေချာကြည့်သည်, ပြီးလျှင် လက်ဖြင့် နို့သီးခေါင်းကို ပွတ်သပ်ကိုင်ကြည့်သည်, ကလေးမမွေးဘူးသော ကျွန်မအတွက်တော့ အပျိုနို့ကဲ့သို့ မပျက်စီးသေး, ခါးနဲ့ဗိုက်က နဲနဲဝသလိုရှိပေမယ့် ” ငါး ပေ ရှစ် လက်မရှိသော အရပ်ရှိလေတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်လို့ကောင်းသလို မြင်မိသည်။
မှန်ဘက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်ပြီး ဘေးကုတင်ပေါ် ခြေထောက်တစ်ဖက်တင်ကာ အမွှေးများနှင့် ကွယ်နေသော မိမိစောက်ဖုတ်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖြဲကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်မှ လက်ခလယ်ဖြင့် အပေါ်ကစပြီး စောက်စိကို ပွတ်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း စောက်ပတ်အပေါက်ထဲကို ထည့်လိုက်ပြီး ကလိနေမိသည်။ ယောကျာ်းလုပ်တာ အကြိမ်တော်တော်ကျဲလာသော စောက်ပတ်အဝသည် ကျဉ်းသလိုရှိလာကာ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့် ကလိလျှင် ကြပ်သလို ခံစားရသည်။ အရည်များ နဲနဲထွက်လာလျှင် လက်ကလိတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်ကို အစုံရပ်လိုက်ကာ မှန်ရှေ့တွင် ဖြည်းဖြည်းတစ်ပတ်လှည့်လိုက်သည်။ အသားအရေ ဖြူသောမိန်းမများထဲတွင် ကျွန်မ ပါသည်, အမြဲထိုင်ရသော ဖင်အဆုံတောင် ဖြူပါသေးသည်။ အားလုံးခြုံပြောရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်သည်, ဒါပေမယ့် စိတ်ခံစားမှု ကာမတဏာအတွက် မပြည့်ဝသည်ကိုတော့ ကျွန်မ မကျေနပ်ပေ။
သူမလုပ်ပေးသည်ကို မတတ်နိုင်, ကိုယ့်ဆန္ဒပြည့်ဖို့ တိတ်တခိုးဝယ်ထားသော လီးတုဆိုဒ် သုံး မျိုးနှင့် အစိကျဉ်စက် နှစ်ခုကို ခုတင်အောက်မှ ထုတ်ကာ မှန်ဖြင့်မြင်နိုင်သော ခုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ပေါင်ကိုကား, လီးတုနှင့်စက်ဖြင့် နှစ်ပါးသွားကာ ပြီးခဲ့ရသည်မှာ အချိန်အားဖြင့် နှစ် နှစ်ကျော်ကြာခဲ့လေပြီ။ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်ငါး ရက်ရဲ့ ပထမရက်တွင် ပုံမှန်မနက် ကိုးနာရီဖွင့်နေကျဖြစ်သော ကျွန်မ၏ ဂေါက် ဆိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ကောင်တာတွင်ထိုင်ကာ ဖေ့ဘုတ် သုံးလိုက် , ရှယ် လုပ်ထားသော ကာမဇာတ်လမ်းဖတ်လိုက်, ဆက်စ်ဗွိဒိယို များကိုကြည့်လိုက်ဖြင့် ညနေကျရင် မိမိဘာသာ စိတ်ကူးယဉ်ကလိဖို့ ကုန်ကြမ်းရှာနေမိသည်။ ထိုစဉ် ဆိုင်မှန်တစ်ခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ ယောကျ်ား သုံး ယောက် ဝင်လာသဖြင့် ကျွန်မလည်း အပြုံးနှင့် ဆီးကြိုလိုက်သည်။ ရှေ့နှစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးကို နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်မိသည်, စိတ်ထဲတွင် သိဘူးသလိုလို စဉ်းစားမိသည်။ ခပ်ကြာကြာကြည့်မိနေသော ကျွန်မကို သူသတိထားမိပြီး ပြန်ပြုံးပြနေသည်။ သူစကားစပြောသည် ” ဒီနိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်က သူတို့လိုတာလေးတွေ လာဝယ်တာ, ဒီက အမျိုးသမီးက လိုက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျ ” ” ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် ” ဟု ပြောကာ နိုင်ငံခြားသားသွားရာနောက်သို့ ခပ်သွက်သွက် လိုက်သွားမိသည်။ ထိုအချိန် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သူ့မျက်လုံးတွေ ကျွန်မနောက်ပိုင်းကိုယ်ကို ကြည့်နေစေချင်မိသည်။ ဝယ်မယ့်ပစ္စည်းများကို အင်္ဂလိပ် စကားဖြင့် ရှင်းပြရင်း ဘေးတိုက်အနေအထားခပ်ဝေးဝေးတွင် ရှိသော သူ့ကို ဖျက်ခနဲ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ အပြုံးမျက်နှာဖြင့် ကျွန်မကိုကြည့်ရင်း မျက်စပြစ်ပြနေသော သူ့ပုံစံက ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဝင်လာသလို ခံစားမိသည်။ တစ်ပြိုင်တည်း ဘယ်လက်တွင် ဝတ်ဆင်ထားသော မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ကို သူမမြင်ရအောင် ဝှက်ထားမိသွားသည်။
လိုချင်တာဝယ်ပြီးသွားသော နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်သည် သူ့ကို လက်ဟန်ခြေဟန်ပြပြီး ဆိုင်အပြင် ထွက်သွားတော့သည်။ ကောင်တာသို့သွားရင်း ကျွန်မမျက်ဝန်းထဲတွင် သူနဲ့လူခြင်းနီးလာမှုကြောင့် အရင်အပျိုဘဝတုန်းက ရင်ခုန်မှုမျိုးလို ခံစားနေမိသည်။ ” ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတွေ့ဆုံဘူးသလား အမျိုးသမီး, စိတ်ထဲ ဝေဝါးနေလို့ မေးကြည့်တာပါ ” ” ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်ကို, မဆုံဖူးတာတော့ သေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးနေသလိုပဲနော် ဒီမြို့ကပဲလား ” ” မဟုတ်ဘူး ဇာတိကတော့ လားရှိုးမြို့နယ်ထဲက လက်ရှိကတော့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်လေ, အန်ဂျီအို အဖွဲ့မှာ အလုပ်ဝင်နေတာ , ဝါသနာပါလို့လေ ” ” ဟင် အဲဒါဆို အစ်ကို့မိသားစု ဘယ်လိုနေမလဲ ” မေးမိသွားသည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် ဘာအတွက်နဲ့ဘာကိုသိချင်နေမိသလဲ မသိ။ ” ဒီက အမျိုးသမီးက ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးလွန်းနေပြီ, လူလွတ် လူပျိုကြီးပါဗျာ, အသက်တောင် လေးဆယ့်တစ် နှစ်ထဲရောက်နေပြီ, မယူချင်တော့ဘူး “။
အဲ ဆောရီး အစ်ကို, ဒါနဲ့ ကျွန်မကို ညီမ လို့ခေါ်ချင်ခေါ်, ဒါမှမဟုတ် နာမည်က ” နီနီထွန်း ” လို့ခေါ်, ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ် ကျွန်မအသက်က သုံးဆယ့်ရှစ်ပဲ ရှိသေးတာ,အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့ပုံပေါက်နေလို့လား ” ဟု ခက်သွက်သွက်ပြန်ပြောလိုက်သည်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို နဲနဲတင်းတင်းကော့ကော့လုပ်လိုက်သည်။ သူ့အကြည့်များသည် ကျွန်မကိုယ်လုံး၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အကုန်ခြုံကြည့်နေပြီး ” ဟုတ်ပါပြီ ပြောင်းခေါ်ပါ့မယ်, ဟုတ်ပြီလေ , နီနီ လို့ခေါ်မယ် သဘောကြလား ” ။ ကျွန်မကို ပြောလိုက်သော သူ့စကားကြောင့် လက်မှာဝတ်ထားသော မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ကိုပင် ချွတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် သဘောကြသွားပါသည်။လွတ်လပ်သော အပြုံးများ နှစ်ယောက်လုံး ပြုံးမိကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကားတစ်စီး ဆိုင်ရှေ့ရပ်လာပြီး ကျွန်မယောကျာ်းရောက်လာသည်။ ရီနေသော ကျွန်မမျက်နှာ တည်သွားသည်ကို သူသဘောပေါက်သွားကာ ငွေရှင်းခြင်းအပိုင်းကို စတင်လိုက်သည်။
အထဲဝင်လာသော ယောကျာ်းသည် နှုတ်ဆက်ကာ နောက်ထဲကို အိမ်သာ ဝင်သွားသည်။ အချိန်နဲနေသော ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်အဖို့ အဆက်အသွယ်လေးတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ရှိနေချင်မိသည်။ ” အစ်ကိုဖေ့ဘုတ် သုံးလား, ခင်ထားရအောင်လို့လေ , အဆက်အသွယ်လေး ရှိနေအောင်လို့ ” ” သုံးပါတယ် နာမည်က ဦးကိုကို , ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပဲ ရှာပြီးအပ်လိုက်တော့နော် သူတို့စောင့်နေလို့တာကြာပြီ , သွားတော့မယ် ” ထွက်သွားသော သူ့ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း ပျော်သလိုလို, လွမ်းချင်သလိုလို ခံစားမိသည်။ ခဏနေ နောက်ထဲမှ ပြန်ထွက်လာသော ယောကျာ်းသည် ကျွန်မဖင်ကို ဆွဲညှစ်ကာ ” မိန်းမ ညကျရင် နောက်ကျမယ် တံခါးတွေ သေချာပိတ်နော် ” မှာပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ ကျွန်မလည်း ဖုန်းကိုယူပြီး ဖရန့်ရှာဖွေရာ ဖြင့် “ဦးကိုကို ” ဟုရိုက်ရှာလိုက်သည်။ စမတ်ကျလွန်းသော သူ့ပုံကိုတွေ့တော့ကျွန်မအပ်လိုက်သည်။
ဆက်စ်အကြောင်း, ကာမအကြောင်း, အပြာစာအုပ်များအကြောင်း များများ လိုက်ရှယ် လုပ်ထားသောကျွန်မရဲ့ ” နီနီ ” ဆိုသော သီးသန့်ဓာတ်ပုံ အမှားနှင့် တင်ထားသော အကောင့်ဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် မက်ဆေ့ဘောက် မှ အကျၤ ီလက်ပြတ်, အကျပ်ဝတ်ပြီး ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံကို ပို့ထားပေးလိုက်သည်။ ဆိုင်သိမ်းပြီး ထုံးစံအတိုင်းအခန်းထဲဝင်, မှန်ရှေ့သွား, ပြီးလျှင် ခံစားမှုကို စက်နှင့်ဖြေဖျောက်ရင်း ပုံမှန်လုပ်နေကြ ကိစ္စများကို ကျွန်မ ပြုလုပ်ဖြစ်သည်။ အခုတစ်ကြိမ် တစ်ခုပြောင်းသွားသည်က ကျွန်မစိတ်ကူးယဉ်မိသော ဇာတ်လိုက်မှာ ” ဦးကိုကို ” ။ ” ဟိုင်း နီနီ မင်္ဂလာပါ ” ဟု ဖေ့ဘွတ်တွင် မတ်ဆေ့ဝင်လာသည်။ ပရိုဖိုင် ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဦးကိုကို ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မပျော်သွားသည်။ စာပြန်မရေးတော့ပဲ ဓာတ်ပုံချက်ခြင်းရိုက်ပြီး ပြန်ပို့ပေးလိုက်သည်။ “အခုဘာလုပ်နေလဲ နီနီ ” ” တစ်ယောက်ထဲပေါ့ ကိုကို, လာမလို့လား” ဟုကျွန်မလည်း သူ့နာမည်ကို အဖျားဆွတ်ခေါ်လိုက်သည်။
မအားသေးပါဘူး ဒီနေ့အလုပ်ရှုပ်အုံးမှာ , မနက်ဖြန် အစ်ကိုအလုပ်ရှင် နိုင်ငံခြားက ဂေါက် ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့လေ, သူက နေပြည်တော်မြို့ကို သွားရိုက်ရမှာ , အဲကျမှ နေခဲ့မှာ လာခဲ့မယ်လေ ” ” ဟုတ်ပါပြီ ကိုကို, ဖုန်းကြိုဆက်လိုက်နော် ” ဟု ပြောကာ ဈေးလိုက်ဝင်လာသဖြင့် ဖုန်းချထားခဲ့လိုက်သည်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ကုန်ပြန်ပြီး ညဆယ်နာရီ ကျော်လောက်တွင် ယောကျာ်းပြန်လာပြီး မူးလာကာ အခန်းထဲရောက်ပြီး တန်းအိပ်ပျော်သွားလေသည်။ မနက် ခွန်နာရီလောက် ယောကျာ်းအိပ်ယာမှ ထလာပြီး ကျွန်မကို ” မိန်းမရေ ကိုယ်အခု နေပြည်တော် တစ်ညအိပ်သွားရမှာ ပြိုင်ပွဲလူကြီး စရင်းထဲ ပါနေတယ်, အိမ်ကို ဂရုစိုက်နော် ” ဟု အသိပေးတဲ့ သဘောမျိုးလောက်သာ ပြောကာ အိတ်ဆွဲပြီး ထွက်သွားသည်။ ဦးကိုကို ကို ညစာနှင့် ဧည့်ခံပါမည်, အိမ်ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးပါမည်ဟု ပြောထားသောကြောင့် စိတ်ပါစွါနှင့် ချက်ပြုပ်လိုက်သည်။
ညနေစောင်းလာသဖြင့် ရေချိုးရင်း တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာ အခါခါဆေးလိုက်သည်။နဲနဲမဲပြီးရှည်နေသော စောက်မွှေးများကို အကုန်ရှင်းအောင် ရိတ်ပြစ်လိုကသည်။ ပြီးလျှင် ပန်းနုရောင် အဝတ်ပါးပါး ဂါဝန်ဝမ်းဆက်ကို ဝတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ေ့ရှတွင် ရပ်ကာ တစ်ပတ်လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ ကျွန်မစိတ်တွင် ဒီညနှစ်ယောက်ထဲရှိနေသောအခါတွင် ကိုကို့စိတ်ထဲတွင် ကျွန်မကို အမှတ်ရစေချင်သည်။ ပြီးလျှင် ထမင်းစာပွဲကို သေချာပြင်လိုက်သည်။ သိပ်မစောင့်လိုက်ရပါ , ကိုကိုရောက်လာပြီး ဆိုင်ထဲဝင်လာသည်။ သူ့လက်ထဲမှ ကိုင်လာသော အနီရောင် နှင်းဆီပန်းစီးကို ကျွန်မကိုပေးရင်း ” ရော့ ဒီမှာ နီနီ အတွက် နှင်းဆီနီနီလေးတွေ,အမှတ်တရပေါ့” ” ကျေးဇူးပါ ကိုကို, ထမင်းစားကြရအောင်နော် ” ဟု ပြောကာ ထမင်းစားပွဲတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်ကြသည်။ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရင်း ထမင်းစားကြသည်။
နီနီ, ဟိုနေ့က နီနီ အမျိုးသားလားဟင် ” . ကိုကိုကမေးလာတော့လဲ ပွင့်လင်းစွာပဲ ” ဟုတ်တယ် ကိုကို , သူ့ကိုသိလို့လား ” “လေး ခါလောက်တော့ ဆုံဘူးတယ်, သဘောကောင်းပါတယ်, ပျော်တတ်တယ် “. ကျွန်မလည်း ခံစားချက်ကို ဖွင့်ချင်တာနဲ့ပဲ ” သူ့ရဲ့ ပျော်တတ်မှုတွေဟာ အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်တွေမှာပါပဲ, မိန်းမဖြစ်တဲ့ကျွန်မကို ဂရုမစိုက်တာ နှစ်နဲ့ကို ချီကြာနေပြီ ကိုကို, ညည့်နက်မှ ပြန်ရောက်တယ်, ရောက်ရင် တန်းအိပ်တော့တာပဲ, ကျွန်မကိုတောင် ပြုံးမပြနိုင်ရှာဘူးလေ, ကျွန်မဘဝက အထီးကျန်နေတာ ကြာလှပါပြီ ကိုကို , အခု ကိုကို နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရလာမှ နဲနဲပျော်လာတာ, မသိခင်တုန်းကဆို ကျွန်မက ဖေ့ဘုတ် နဲ့ပဲ အချိန်ဖြုန်းရတာပဲလေ, ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကို” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ” ဟုတ်ပါပြီ နီနီရယ်, အားတိုင်း လှမ်းဆက်ပါမယ်, မတ်ဆေ့လည်းပို့ပါ့မယ်, ဒါနဲ့နီနီ အမျိုးသားတွေ့သွားရင် ဇာတ်ရှုပ်ကုန်အုံးမယ်နော် “။
အမယ်လေး သူကဖြင့် ကျွန်မ ဖုန်း မပြောနဲ့ လူတောင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး, ကြာပေါ့” ဟု ကိုကို့ ကို မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးကာ ကျွန်မ ပြောလိုက်သည်. အကြည့်ချင်းဆုံစွာ အချိန်ကြာသွားသည်. ” နီနီ ဒီတစ်ခါ ဒီမြို့လာရတာ ပျော်လိုက်တာ , နောက်လဲ အမြဲလာမယ်နော် ရတယ်မို့လားဟင် ” ” သိပ်ရတာတာပေါ့ ဖုန်း ကြိုဆက်လေ အားအောင်လုပ်ထားလိုက်မယ်, ကိုကို အချိန်ရရင် အပြင်တောင် လျောက်လည်လို့ရသေးတယ်, ဟုတ်ပြီလား ” ” ယုံပါတယ် နီနီ, ကဲ အချိန်က ဆယ်နာရီ နာရီ ထိုးပြီ ညည့်နက်နေပြီ, စားလို့လဲ ပြီးပြီ, ကောင်းတယ် ကျေးဇူးပဲ နီနီ အစ်ကို ပြန်တော့မယ်လေ နောက်တစ်ခေါက် လာမယ်ဆို ကြိုဖုန်း ဆက်မယ်လေ “ဟု ကိုကို ပြောလာသည်. ကျွန်မ ကိုကို မလာခင် စိတ်ကူးယဉ်ထားမှုသည် သူနှင့်ကျွန်မ အိပ်ခန်းထဲမှာ စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်တင်းနှောကြသော ပုံစံမျိုး, ယခု ကိုကိုက ပြန်တော့မယ်ဟု နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားမည့်ပုံစံမျိုးကို ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် မလိုချင်ပါ။
ကိုကို ဘက်က စလာနိုးနှင့် စောင့်လိုက်တာ သူပြန်တော့မယ်ဟု နှတ်ဆက်သည့် အချိန်ကို ကြုံလာသည်. ကျွန်မ ဘဝတွင် စိတ်ကူးနဲ့ ရူးသည်,ဆက်စ်အကောင့် များကို လိုက်လုပ် လုပ်ပြီး ဝင်ကြည့်သည်, ယောကျာ်း မသိအောင် ဝယ်ထားသော လီးတု ဆိုဒ်စုံ သုံး ချောင်းဖြင့် ပြီးမြောက်အောင် အာသာဖြေသည်. ယခု ကိုကိုနဲ့မှ စိတ်အားထည့်ကာ လက်တွေ့ကာမ ကိစ္စအတွက် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်. ကျွန်မအတွက် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ဖို့မှာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပင်, ယခု ကိုကို ပြန်တော့မည် ဆိုတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမည်ကို မသိပဲ စိတ်ရှုပ်စွာ ကိုကို့ ကိုကြည့်နေမိသည်. မတ်တပ်ရပ်နေသော ကိုကို က ” နီနီရေ ကိုကို အိမ်သာသွားချင်လို့ ” . ကျွန်မ သတိပြန်ဝင်လာကာ ” ဟုတ် ကိုကို ဒီလမ်းတိုင်းပဲ, အိမ်သာက အိပ်ခန်းထဲမှာ သွားလေ ရပါတယ် ” ” ကောင်းပါ့မလား နီနီ သူများရဲ့ အိမ်ထောင်သည် အခန်းထဲကိုလေ ” ” သွားပါ ကိုကိုရယ် နီနီ တို့က သူစိမ်းတွေမှ မဟုတ်တော့တာကို “။
” ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ” ဟုပြောကာ ကိုကို ကျွန်မတို့ အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်သွားသည်. ကျွန်မလည်း စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမည်ကို မသိပေ, ထိုစဉ် လျှပ်စစ်မီး ပျက်သွားပြီး တစ်အိမ်လုံးမှောင်သွားသည်. ” ဟယ် ကိုကို မီးပျက်သွားပြီ ရရဲ့လားဟင် ” ဟုအော်မေးလိုက်သည်. ” ရတယ် နီနီ, ကိစ္စပြီးပြီ ထွက်လာတော့မှာ ” ” ဟုတ် ကိုကို , နီနီကို မီးစက်လေး ကူနှိုးပေးပါအုံးနော် ” ” ရတယ်လေ မီးစက်က ခုဏ ဒီရေချိုးခန်းထဲမှာ မို့လား, ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကိုယ့် ဖုန်း ရှိတယ် နီနီ ယူခဲ့ပါလားဒီထဲကိုလေ ” ” ဟုတ် ကိုကို ” ဟု ဆိုကာ ကိုကို့ဖုန်းကို ယူကာ ဖုန်းမီးဖွင့်ဖို့ စကရင် ကို နှိပ်လိုက်သည်တွင် ကျွန်မသူ့ဆီ မတ်ဆေ့ပုံပို့ထားသော ဓာတ်ပုံကို မြင်လိုက်ရသည်. ကျွန်မ ပျော်သွားပြီး လမ်းလျောက်လိုက်ရာ နောက်ထဲက ထိုင်ခုံတစ်လုံးနှင့် ကျွန်မဒူးခေါင်းတိုက်မိသွားရာ ” အမေးလေး ” ဟုအော်မိလိုက်သည်။ ” နီနီ ဘာဖြစ်တာလဲ ရလား ” ” ရတယ် လာပြီဟု ပြောကာ မီးဖွင့်ပြီး ကိုကိုဆီသွားလိုက်သည်။
ကိုကို ကမီးစက်နှိုးပေး၍ မီးလင်းသွားသည်။ ကျွန်မကိုကို့ ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီတွေ ရေတော်တော်ရွှဲနေသည်, ပြီးတော့ ဘောင်းဘီဇတ်လည်း မဆွဲရသေး။ ” အဲ ကိုကိုဘောင်းဘီရေရွှဲနေပြီ တစ်ခုခုလဲလိုက်, ကျွန်မပေးမယ် ” ဟု ပြောကာ ဘီတိုဆီလာခဲ့သည်။ ” ရတယ် နီနီ ကိုကိုပြန်မှာပဲ ထားလိုက်ပါ ” ။ ကိုကိုပြောတာနဲ့ သူ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်ပြောမည်အပြုတွင် ” ဟာ နီနီ့ ဒူးမှာ သွေးထွက်နေတယ်, ခုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်, အစ်ကို ဆေးထည့်ပေးမယ် ဆေးရှိလား ” ” ရှိတယ် ဟိုမှာ ” ပြောလိုက်ပြီး ထိုင်နေလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကျွန်မ နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံယူထိုင်လိုက်ပြီး ဒူးပေါ် ဖုံးနေသော ကျွန်မ စကက်ကို နဲနဲလှန်လိုက်ပြီး ဆေးရည် စတို့ပေးသည်။ ကျွန်မ စပ်လို့ ” အမလေး ကိုကို ” ဟု အော်ကာ ကို့ကို့လက်ကို ဆွဲထားမိသည်။ ” မနာပါဘူး နီနီရဲ့ ပျောက်ပါပြီ ” ” လန့်သွားလို့ပါ ကိုကို, ဒါနဲ့ ပြန်တော့မှာလားဟင် ” “ဘာလို့လဲ နီနီ , ကိုကို ဘာကူညီပေးရအုံးမလဲ ပြောပါ “။
ကျွန်မ ခဏတွေးနေမိသည်, စိတ်အလိုမကြ ဖြစ်မိသည်။ ထိုစဉ် ” နီနီ ဘာတွေးနေတာလဲ , ဘာကူညီရမလဲလို့ မေးနေတာလေ”။ ကျွန်မလည်း လန့်သွားပြီး ” ဟိုလေ…. ဟိုလေ….. ကိုကို အခုည မပြန်ခင် ကျွန်မကို ချစ်ပေးခဲ့ပါလားဟင်, ကျွန်မ လိုအပ်နေလို့ပါ, တောင်းပန်ပါတယ်နော် , ရှက်လည်းရှက်မိပါတယ် ” စကားလုံးများ ဆက်တိုက်ပြောကာ အိပ်ရာပေါ် နောက်ပြန်လှဲအိပ်ပြီး မျက်နှာကို စောင်နဲ့အုပ်လိုက်သည်။ နှလုံးခုန်သံတွေ ကျွန်မရင်ထဲ မြန်လွန်းနေသည်, ထူပူဆူနေပြီ, မတတ်နိုင်တော့ပေ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်မ စခံစားမိသည်မှာ ကျွန်မဝတ်ထားသော စကက်တိုလေး ဖြေးဖြေးချင်း အပေါ်သို့ လန်လာသည်။ နောက်ပြီး ကိုကို့ လက်နှစ်ဖက်က စကက်အောက်မှ ဝင်လာကာ ကျွန်မအတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ဆွဲချွတ်သွားသည်ဟု ခံစားရသည်။ ကျွန်မလည်း ခေါင်းအုပ်ထားသည်ကို မဖယ်ပဲ ငြိမ်နေသည်, ရင်ခုံသံတွေတော့ မြန်နေသည်။
ကိုကို့ဆီမှလည်း စကားပြောသံ မကြားရပေ ပြီးလျှင် ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကိုကို့လက်နှစ်ဖက်က ဖြဲကားလိုက်ပြီး ပေါင်ရင်းအဆုံရှိ ကျွန်မ စောက်ပက်ရဲ့ ဟိုဘက်သည်ဘက်ကို ညင်သာစွာ ဆွဲဖြဲနေသည်။ ကျွန်မလည်း ဘယ်အချိန် စောက်ပက်ထဲ ဝင်လာမည်ဖြစ်သော ကိုကို့ လီးရဲ့ ဆိုဒ် ကို စိတ်ထဲတွင် ခန့်မှန်းနေမိသည်, စောင်ကိုတော့ ကျွန်မ မဖယ်မိပေ။ ကျွန်မရဲ့ စောက်စိလေးကို ကလိပေးသလို ခံစားရသည်, ကောင်းသည်, အရသာရှိသည်, ကျွန်မကိုယ်တိုင် လက်နဲ့လုပ်သည်ထက်ကို ကိုကို လုပ်ပေးတာ ပိုခံလို့ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သေချာခံစားပြီး စဉ်းစားလိုက်တော့ စောက်စိကို ဆွပေးနေတာဟာ ကိုကို ၏ လက်နှင့် လီး မဟုတ်နိုင်ဟု ထင်ပြီး မျက်နှာကို ဖုံးထားသော စောင်ကိုလှန်ကာ ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်မ မြင်ကွင်းတွင် ကိုကို့ ခေါင်းသည် ကျွန်မပေါင်ကြားတွင် ရောက်နေပြီး မျက်လုံးများကို မှိတ်ကာ သူ့လျှာဖြင့် စောက်စိကို အသာအရာလေး လျက်ပေးနေသည်။
အံ့သြ, အားနာသွားကာ ကျွန်မလည်းပေါင်ကို ဆွဲစိပြီး ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် မရပါ , ကိုကို့ လက်နှစ်ဖက်က ဆွဲချုပ်ထားသည်။ ကျွန်မလည်း လှန်သွားပြီး ” ကိုကို အဲသလို မလုပ်ပါနဲ့ ငရဲ ကြီးပါလိမ့်မယ်, အားလည်း နာလို့ပါ တော်ပါတော့ ” ကိုကိုလည်း မျက်လုံးဖွင့်လာကာ ” နီနီ , ကိုယ်လုပ်ပေးတာ မနေတတ်လို့လား ” ” မသိဘူး, အားနာလို့ပါ, မလုပ်လဲရပါတယ် ,ကျွန်မ အရည်ကထွက်နေပြီ လုပ်လို့ရပြီ ကိုကို ” ” ဟုတ်ပါပြီ ကိုယ်ကိုက လျက်ချင်နေတာ အမွှေးတွေ ပြောင်နေတော့ နီနီ စောက်ပက်က ထင်းနေတာ ပြန်အိပ်နေနော် ” ဟု ပြောကာ စောက်ပက် ကို ဆက်ပြီးလျှက်နေသည်။ ဆယ့်ငါး မိနစ်ခန့်ကြာတော့ ကျွန်မ ခံစုးချက်ပြင်းထန်လာသည်။ ” ကိုကို တော်တော့နော် ကျွန်မ ပြီးချင်လာပြီ လုပ်ကြစို့နော် ” ” ပြီးလိုက်လေ နီနီ ” ဟု ပြောကာ နှာခေါင်းပါ မြုပ်လုနီးပါး တိုးကပ်ကာ ကိုကို လျှာက အားထည့်ပြီး လျှက်နေလေသည်။
” ကိုကို တော်ပါတော့ ပြီးသွားလိမ့်မယ် , အရည်တွေ ပိုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ” ” ကိုယ်က အဲဒီ အရည်ကို ကြိုက်တယ် ပြီးချင်ပြီးလိုက် “ဟုပြောကာ မနားတမ်း လျှက်တော့သည်။ ကျွန်မလည်း မခံစားနိုင်တော့ပဲ ကိုကို လျှက်, ကျွန်မကလည်း ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးကာ ကိုကို့လျှာရက်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်ခါပြီးသွားသည်။ အစကတည်းက အားတင်းထားရသဖြင့် မောသွားကာ ကျွန်မ ငြိမ်နေမိသည်။ ” ကောင်းလား နီနီ, လီးနဲ့လုပ်တာနဲ့ ဘာကွာသလဲဟင် ” ဟု ပြောရင်း ကိုကို က သူ့ အဝတ်အစားများကို အကုန်ချွတ်နေသည်။ ” ဒီလို လျှာနဲ့တော့ တစ်ခါမှ မခံဘူးပါဘူး, ကောင်းပါတယ် ” ဟု ပြောကာ ကျွန်မလည်း အကျႌအကုန်လုံး ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် မျက်လုံးက လှုပ်ရှားနေသော ကိုကိုယ့် လက်ချောင်းတွေ ဆီ ရောက်သွားသော အခါ ခြောက် လက်မလောက်ရှည်သော လီးညိုညိုကြီးကို တွေ့မိသည်။ ကျွန်မယောကျာ်း လီးနှင့် ယှဉ်ကြည့်လျှင်။
ကိုကိုယ့်လီးသည် နဲနဲ ပိုရှည်မည်, လုံးပတ်ကတော့ တူတူလောက်ဟု ထင်ရသည်။” ကဲ နီနီ ကိုယ့်တို့ စချစ်ရစို့နော် ဟု ပြောကာ ကုတင်ပေါ် တက်လာပြီး ကျွန်မရဲ့ ဖြဲထားသော ပေါင်ကြားတွင် ထိုင်ကာ သူ့လီးထိပ်ကြီးဖြင့် အရည်ရွှမ်းနေသော ကျွန်မ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ဆွဲပြီး ကလိနေပြန်သည်။ ကျွန်မလည်း ဖီးတက်လာကာ ကိုကိုလုပ်ပါတော့, ထည့်ပေးပါတော့ဟု ပြောလိုက်ရာ ” ကဲ ထည့်တော့မယ်နော် နီနီ နာရင်ပြောနော် , အဆင်မပြေရင်ပြော ” ဟု ဆိုကာ ကိုကိုယ်သည် သူ့လီးကို စောက်ပတ်ထဲ သို့ ဖြေးဖြေးချင်းစထည့်လေတော့သည်။ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်း ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ နဲနဲချင်းပိုပိုသွင်းကာ အဆုံးနားထိရောက်လာပြီး သူ့ကိုလုံးကို ကျွန်မပေါ်သို့ မှောက်ကာ ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ, နားထဲတွေ, လည်ပင်းတွေ, ဂျိုင်းကြားတွေကို လျှာဖြင့် လျှောက်ရက်ပေးရင်း လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မနို့သီးများကို ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။
အောက်က လီးကလည်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ပေးနေရင်းမှ သွက်လာကာ အားပါလာသည်။ကျွန်မလည်း ခံစားလို့ကောင်းလာကာ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကိုက်နေမိသည်။ ” နာလို့လား နီနီ, အရှိန်လျော့ပေးရမလား ” ” ရတယ် ကိုကို , စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ, မခံနိုင်ရင် ပြောပါ့မယ် ” ။ ကိုကိုမျက်နှာ ပြုံးသွားကာ ကျွန်မကို အနမ်းပေးပြီး အားပိုထည့်ကာ ဆကလုပ်လေသည်။ ကျွန်မ စောက်ပတ်သည် ငါး နှစ်ခန့် သွင်းခံနေရသော ယောကျာ်း၏ လီးအတုတ်နှင့် ဆိုဒ်တူသော ကိုကို့လီးကို အကျယ်အဝန်းက ခံနိုင်ပါသည်, သို့သော် ကိုကို့ လီးသည် တစ် လက်မ ကျော်လောက်ပိုရှည်သဖြင့် ဆောင့်ချက်အားပါသောအခါတွင် စောက်ခေါင်းထဲမှာ အောင့်သလိုလို, ကောင်းသလိုလို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ သုံးဆယ် မိနစ်ခန့် ကြာလာသောအခါ ကျွန်မလည်း ပြီးချင်လာသဖြင့် “။
ကိုကို သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးပါ, ကျွန်မ ပြီးတော့မယ် , ဟုတ်ပြီ ကိုကို ဆောင့်ပါ… ဆောင့်ပါ ” ဟုပြောကာ ကျွန်မလက်များဖြင့် ကိုကို့ ရဲ့ဖင်တွေပေါ်ကို ဆွဲဖိလိုက်, ပွတ်ပေးလိုက်ဖြင့် ကိုကိုရဲ့ဆောင့်အားကောင်းအောင် ကူပေးနေမိသည်။ ” အင်း….. အင်း…အင်း ” ဟုကျွန်မ ပါးစပ်မှ ညည်းနေသလို ကိုကိုလည်း အသက်ရှူသံများပြင်းလာကာ ပါးစပ်ကလည်း ” ချစ်လေး ကောင်းလား…. ကောင်းလား, ပြီးရင် ပြောနော် “ဟု ဆိုကာ အကြိမ် သုံးဆယ် ခန့် အားအပြည့်နှင့်ဆောင့်ပေးနေတော့သည်။ ” ပြီးပြီ ကိုကိုရေ , ကောင်းတယ်, ချစ်သွားပြီ ကိုကိုရာ ” ဟု ကျွန်မလည်း ပြောရင်း သူ့ကိုယ်လုံးကို ဆွဲဖက်ကာ ကပ်ထားလိုက်သည်။ ကိုကိုလည်း ငြိမ်နေသည်, ကျွန်မလည်း သူ့ကျောပြင်ကိုပွတ်ပေးရင်း ” ကိုကို မောသွားပြီလား, ဘေးလှိမ့်လိုက်ပါ, ညီမ ရေသွားခပ်ပေးမယ်နော် …… ပြီးပါပြီ။
နှဖူးထက်က ချွေးစလေးတွေကို လက်ခုံနဲ့တို့သုတ်ရင်း ရှင်းလက်စအမှိုက်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်လိုက်သည် အရာရာ နေရာတကျရှိမရှိ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်ရင်း ကျေနပ်ဟန် ပြုံးသွားကာ အခုမှ စိတ်သက်သာသည့်ဟန်နှင့် အမှိူက်ပုံးနား တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ချလိုက်သည် ခန့်ငြားသည့် ကုတင်ကြီးပေါ်မှ ပန်းပွင့်အကြီးကြီးပုံတွေနဲ့ ခင်းထားသည့် မွေ့ယာ ဖက်လုံး ခေါင်းအုံး စောင် အရာရာ စနစ်ကျဖြစ်သွားပြီမို့ ကိုကို့အခန်းလေးက နေချင်စဖွယ် အသွင်ကိုဆောင်နေသည် အိစက်သည့် ဒီမွေ့ယာပေါ်မှာ ကိုကိုအိပ်မည့်ပုံစံလေးကို မျက်လုံးလေးမှေးကာ ပုံဖော်ကြည့်ရင်း ရှင်းသန့်သည့် မျက်နှာလေးပေါ်မှာ စွဲမက်ဖွယ်အပြုံးလေး ရှပ်ပြေးသွားသည်…။ မြလေး ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်တာ ၅နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပြီမို့ ဒီအိမ်သားတွေနဲ့ မြလေးဆိုတာ မိသားစုဆိုလျင်မမှား ဦးဖေနှင့်ကိုကိုတို့ကပင် မြလေးကို အိမ်ဖော်(အိမ်ပေါ်)လို့မသုံး ဘယ်သူမေးမေး အိမ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် အရာသွင်းကာ တူမ ညီမစသည်ဖြင့် ပြောပြလေ့ရှိသည်….။ မှတ်မိသေးသည် ရောက်ခါစတုန်းက မြလေးအသက်မှ […]
ဒီတစ်ခေါက်ခြံထဲကိုလာတာဦးစိုင်းလုတစ်ယောက်ထဲဖြစ်လို့ခမ်းအံ့အောနေသည်။ခါတိုင်းတောင်ကြီးကနေဟဲဟိုးကော်ဖီခြံကိုလာတိုင်းစော်တစ်ပွေအမြဲတန်းပါလာတတ်လို့ခမ်းကချက်ပြုတ်ပေးပြီးတာနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးရှောင်နေရသည်။ ဦးစိုင်းလုကခမ်းကိုဝက်လက်ပေါင်းစားချင်တယ်ဆိုလို့မီးဖိုထဲမှာအလုပ်ရွုပ်နေတုန်းဦးစိုင်းလုဝင်လာလို့”ဟဲဟဲဒီတစ်ခေါက်အန်ကယ်လာတာထူးဆန်းနေပါလား”လို့ပြောလိုက်သည်။ဦးစိုင်းလုက”ဘာကိုထူးစမ်းတာလဲ”လို့ပြန်မေးလို့ရှမ်းသံဝဲဝဲလေးနဲ့”စော်မပါတော့တာလေ” လို့ပြောအပြီးမှာဦးစိုင်းလုက”ဒီမှာရှိနေတာဘဲ”လို့ခမ်းကိုလက်ညှိုးထိုး ပြသည်။ခမ်းရင်တွေတုန်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာသွားသည်။ခမ်းကသူရဲ့အလုပ်သမားဖြစ်သည့်အပြင်တစ်ခုလပ်ဖြစ်တာကိုသူသိရက်နဲ့ခမ်းကိုသူကမယားလိုနေမယ်ပြောတာဖြစ်လို့အံ့အောပြီးရင်တုန်သွားတာဖြစ်လေသည်။”ဟာအန်ကယ်ကလည်းခမ်းကအလုပ်သမားပါ”လို့ညှိုးငယ်စွာပြောလိုက်သည်။ ဦးစိုင်းလုကတကယ့်ကိုချမ်းသာပြီးအလုပ်သမားတွေကိုလည်းပြည့်စုံအောင်ထားသူဖြစ်သည်။သူ့ဖာသူမိန်းမပွေပေမဲ့လူတန်စားမခွဲခြားလို့ခမ်းအပါအဝင်အလုပ်သမားအားလုံးကလေးစားပြီးချစ်ကြသည်။ဒီကော်ဖီခြံကလည်းသူမလုပ်ရင်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့အလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိသည်။ သူ့အကျိုးကိုရှေ့မထားဘဲသူအပန်းဖြေရန်အတွက်သာရည်စူးပြီးဘန်ဂလိုလေးတစ်လုံးဆောက်ကာတပါတ်တစ်ညအိပ်လောက်လာအပန်းဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးစိုင်းလုကခမ်းကိုဖက်ထားပြီး”ခမ်းကချောတယ်စေတနာလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နောက်လာတိုင်းစော်ခေါ်မလာဘဲခမ်းနဲ့နေမယ်”လို့ပြောပြီးခမ်းနွုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ခမ်းအတွက်လုံးဝမထင်ထားတာမို့ထပ်အံ့အောနေရပြန်တော့သည်။”အန်ကယ်ရယ်ဟင်းချက်အုံးမယ်လေ”ဆိုတော့ဦးစိုင်းလုအားမလိုအားမရဖြစ်သွားပြီးလွတ်လိုက်သည်။ ခမ်းကအိမ်ထောင်ကွဲပြီးကတည်းကဦးစိုင်းလုကော်ဖီခြံမှာဝင်လုပ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ခြံထဲမှာအလုပ်သမားတွေနေဘို့တန်းလျားဆောက်ပေးထားလို့လည်းအတော်အဆင်ပြေသည်။လစာတစ်သိန်းဆိုပေမဲ့ ဆန်ဆီဆားကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့လို့စားဝတ်နေရေးပူစရာမလို။ခမ်းလိုတစ်ဦးတည်းနေတဲ့ဘဝကသာသာယာယာဖြစ်သည်။ ခမ်းကတစ်ခုလပ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်လုံးကအတော်တောင့်သည်။အလုပ်ကြမ်းလုပ်နေလို့ဖြူတဲ့အသားကနေလောင်ထားပေမဲ့အတော်ကြည့်ကောင်းသည်။ အသက်ကလည်းသုံးဆယ်ဝန်းကျင်မို့ငယ်ဂုဏ်ကမပျောက်သေး။ဦးစိုင်းလုတွေးနေရင်းခမ်းကိုစားမယ်လို့တွေးမိသည်။ဒါကြောင့်ဒီ အပါတ်ဂေါက်ကွင်းကစော်တွေကိုခေါ်မလာဘဲတစ်ဦးတည်းလာခဲ့တာဖြစ်သည်။ ဟင်းချက်နေတဲ့ခမ်းကိုနောက်ကနေကြည့်ရင်းဦးစိုင်းလုစိတ်ပိုကြွပြီးလီးကတောင်လာသည်။ ခမ်းမကျက်သေးဘူးလားကွာ လို့မေးတော့ “ဟယ်ကလေးကျနေတာဘဲကွယ်”လို့ခမ်းကပြောသည်။ဦးစိုင်းလုက”ခမ်းနဲ့ဆိုကလေးလေးလိုဘဲပေါ့”လို့သူဌေးကြီးကြွေနေရှာပြီ။ခမ်းကတခစ်ခစ်ရီပြီး”ပြီးမှခိျိုချို တိုက်မယ်နော်”လို့လှည့်ပြောသည်။ ခမ်းမီးဖိုထဲကနေထမင်းစားစားပွဲပေါ်ဟင်းတွေတင်ပြီးအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်သည်။ပြီး”အန်ကယ်ခမ်းရေပြန်ချိုးအုံမယ်”လို့ပြောသည်။ဦးစိုင်းလူက”ချိုးမနေပါနဲ့ကွာ”ဆိုကလေးလိုထပ်ပူဆာပြန်သည်။ခမ်းက”ချွေး တွေနဲ့ကွာရွံစရာကြီး”လို့ပြောပြီးဆင်းပြေးသွားသည်။ဦးစိုင်လုလည်းရေချိုးလိုက်သည်။ခမ်းပြန်ရောက်ပြီးထမင်းဝိုင်းပြင်နေတုန်းဦးစိုင်းလုကခမ်းကိုဖက်ပြီးနွုတ်ခမ်းကိုနမ်းရင်းတစ်ကိုယ်လုံးပွတ်သပ်လေသည်။ခမ်းက”ထမင်းစားပါအုံး”ပြောတော့”ချစ်ချင်ပြီခမ်းရယ်”ဆိုထမီကိုအတင်းဆွဲချွတ်သည်။”အိုကွာ”ဆိုဘဲပြောရသေးသည်ဦးစိုင်းလုလက်ကစောက်ပတ်ကြီးထဲမွေနှောက်နေလေပြီ။ခမ်းစောက်ဖုတ်ကအရည်တွေစမ်းမိတော့ဦးစိုင်းလုကလည်းခမ်းစိတ်ပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားသည်။ခမ်းရဲ့ခြေတဖက်ကိုဦးစိုင်းလုကဆွဲမပြီးထိုင်ခုံပေါ်တင်ကာ ဘာဂျာကိုင်ဘို့လုပ်သည်။ခမ်းက”အန်ကယ်ခမ်းကသူများလိုးပြီးသားနော်”လို့ပြောပေမဲ့မရ။စောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးလျာကြီးကခမ်းစောက်ဖုတ်ပေါ်ထိလာသည်။”ရွီးကိုကြီးရယ်ရွံစရာကြီးကိုကွာ”ဆိုခမ်းကော့ပေးလိုက်သည်။ ဦးစိုင်းလုနွုတ်ခမ်းမွေးတွေကလည်းတစ်ချက်ချက် စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်မိထိုးမိနေလို့ခမ်းတအားကောင်းနေသည်။ ခမ်းငုံ့ကြ ည့်ပြီးဖီးလ်ယူလိုက်သည်။ကာမဆန္ဒဆိုတာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တောင်မရှိပါလားလို့ခမ်းတွေးမိလိုက်သည်။”ဝူးကိုကြီး ခမ်းအရမ်းယားတယ်ဝေ့ဖြေးဖြေးယက်ပါကွာ”လို့စောက်စိကကြင်ကနဲဖြစ်သွားလို့ခမ်းပြောလိုက်ရသည်။”ဝို့တော်ပြီလေကွာခမ်းမလိုးရသေးဘဲတစ်ခါပြီးပြီ”ဆိုတော့မှဦးစိုင်းလုရပ်ပြီးခမ်းကိုတင်းတင်းကြပ်ြက်ပ်ဖက်ထားသည်။ပြီး”ခမ်းကတအားသန့်တယ်”လို့ပြောသည်။ခမ်းလည်းဦးစိုင်းလုပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ဘွားကနဲလီး ကြီးကပေါ်လာသည်။လုံးပတ်ကလည်းခပ်တုတ်တုတ်အရှည်ကလည်းခုနှစ်ပေခွဲလောက်ရှိသည်။”ဝေးအကြီးကြီးဘဲဒါကြောင့်တောင် ကြီးကကောင်မတွေပြန်တဲ့နေ့တိုင်းမျက်တွင်းကျတာကို”ဆိုပြော ပြီးလီးတစ်ချောင်းလုံးလျာနဲ့တစ်ချက်ပင့်ယက်ပြီးနွုတ်ခမ်းနဲ့ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ဦးစိုင်းလုခါးကော့လာပြီး”ခမ်းရယ်အရမ်းကောင်းတာဘဲ” လို့ခမ်းကိုချီးကြူးနေတော့သည်။ ခမ်းကအပျိုစဖြစ်ကတည်းကယောကျာ်းလီးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည်။အဲ့ဒီကတည်းအိမ်မှာလူလစ်တိုင်းအစ်ကိုအခန်းထဲထဲကအောအခွေကိုခိုးခိုးကြည့်တတ်သည်။တခါတလေလည်းအပြာစာအုပ်တွေ့ရင်ခိုးဖတ်တတ်သည်။အောကားထဲကလီးစုပ်တာကိုမှတ်သားထားပြီးစိတ်ပါလို့လက်နဲ့အာသာဖြေတိုင်းငှက်ပျောသီးကိုအခွံခွါကာလီးလို့သဘောထားစုပ်ကြည့်တတ်သည်။ဒါ့ကြောင့်လီးစုပ်တာကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။နောက်သူကျွမ်းကျင်တာတွေလည်းဆက်လာအုံးမည်ဖြစ်သည်။ “ခမ်းတော်ပြီတော်ကြာတို့မလိုးရဘဲပြီးသွားလိမ့်မယ်”လို့ဦးစိုင်းလု ပြောယူရတော့သည်။ ”ကဲကိုကြီးကခမ်းပြောသလိုနေရမယ်”ဆိုတော့သူဌေးကြီးခမျာကလေးလေးလိုခေါင်းငြိမ့်ပြရသည်။ပြီးခမ်းက”ထိုင်ခုံပေါ်မှာလျောချထိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုခမ်းကကိုကြီးမပင်ပမ်းအောင်အပေါ်ကလိုးပေးမယ်”ဆိုကျောပေးခွလိုက်သည်။ ဒူးနှစ်ချောင်းကွေးကာစာက်ပတ်အဝမှာလီးတေ့ပြီးဖင်ကိုဝိုက်လို့ဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်တော့သည်။”အီးအို့ဟိုးတော်လိုက်တဲ့ခမ်း”ဆိုအပေးကောင်းလွန်းလို့ဦးခမ်းလူထပ်ချီးကျူးရပြန်သည်။”ဘွပ်ဘွပ်ဘွပ်ဘွပ်”နဲ့ဆောင့်ချက်ကမြန်လာသည်။”ကိုကြီးရယ်ကောင်းရဲ့လား” ဆိုတော့”အရမ်းကောင်းတာဘဲခမ်းရယ်”ဆိုတကဲ့ဖီးလ်သံနဲ့ဦးစိုင်းလု ုပြောလိုက်သည်။”အိုအိုခမ်းပြီးနေပြီအအအီး”ခမ်းလီးတစ်ချောင်းလုံးသွင်းပြီးငြိမ်ကျသွားသည်။ပြီး”ကိုကြီးနောက်ကဆောင့်တော့”ဆို ဦးစိုင်းလုကိုလက်နောက်ပြန်ဆွဲပြီးလီးကျွတ်မသွားစေဘဲလေးဘက်ကုန်ပေးလိုက်သည်။ဒီးတခါဦးစိုင်းလုအလှည့်မို့ဦးစိုင်းလုဆောင့်တော့သည်။ဆောင့်လို့လီးတဆုံးဝင်တိုင်းခမ်းကဖင်ကိုမြန်မြန်ခါပေးနေပြန်သည်။အပေးကောင်းတဲ့ခမ်းကြောင့်ဦးစိုင်းလုအရမ်းခိုက်သွားတော့သည်။”အီးကိုကြီးရယ်လိုးပါခမ်းတအားကောင်းတယ်ကိုကြီးရယ်ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးကိုခမ်းတအားဆွဲသွားပြီကွာလိုးလိုးကိုကြီးလိုး”နဲ့ခမ်းရဲ့ညီးပြောပြောသံနဲ့လွုပ်ရှားဟန်ကြောင့်ဦးစိုင်းလု”အို့ဟိုအီးဟီး”ဆိုအော်ကာခမ်းစောက်ပတ်ထဲလီးရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ပြီးအပေါ်ကနေခမ်းကိုဖက်ကာဝက်မှေးမှေးရင်းဟောဟဲဟောဟဲနဲ့မောနေသည်။သူ့ခမျာပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ဆေးကောင်းမှီဝဲပြီးလီးတောင်ရပေမဲ့အသက်အရွယ်အရအမောဖေါက်နေပါလားလို့ခမ်းတွေးလိုက်သည်။ ထမင်းစားပြီးခမ်းက”ခမ်းခနပြန်မယ်တော်ကြာကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေရိပ်မိကုန်မှာစိုးလို့”ဆိုတော့နေ့ခင်းစားဘို့ရှမ်းခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲ ဝယ်ခဲ့ဆိုငွေနှစ်သိန်းခွဲထုတ်ပေးသည်။”ဟာတစ်ပွဲမှသုံးရာပါအများကြီးမလိုဘူးလေ”ဆိုတော့”ခမ်းအတွက်မုန့်ဘိုးလေ”လို့ပြောသည်။ ပြီး”ခမ်းကတို့မယားလေမယားဆိုတော့မယားစာရိတ်ပေးရမပေါ့”လို့ဆက်ပြောသည်။ခမ်းကစိတ်ထဲကနေတော်သေးတာပေါ့မယားစာရိတ်ဆိုလို့လို့တွေးမိလိုက်သည်။ နေ့လည်ခမ်းပြန်ရောက်တော့အလုပ်သမားခေါင်းနဲ့ဦးစိုင်းလုခြံအ ကြောင်းစကားပြောနေကြသည်။ခမ်းလည်းရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့တို့ဟူး ကြော်ကိုဧည့်ခန်းစားပွဲသွားချပေးလိုက်သည်။ပြီးမီးဖိုတည်ကာကော်ဖီ ဖျော်ဘို့ရေနွေးသယ်ရင်းထိုင်နေသည်။ဦးစိုင်းလုမီးဖိုထဲဝင်လာတော့မှအလုပ်သမားခေါင်းပြန်သွားတာကိုသိရသည်။ခမ်းကထပြီးဦးစိုင်လုကိုဖက်ကာလီးကိုစမ်းကြည့်တော့ပျော့ခွေနေသည်။ပြီး”လိုးပေးအုံးမှာလား”လို့ယောကျာ်းတွေကြိုက်တဲ့အသုံးအနွုံးကိုပြောလိုက်သည်။ဦးစိုင်းလုပြုံးပြီးခေါင်းငြိမ့်ပြကာအိမ်သာထဲဝင်သွားသည်။ကော်ဖီဖျောပြီးသွားချပေးတော့ဦးစိုင်းလုကဘေးခေါ်ထိုင်ခိုင်ပြီးလီးပျော့ကြီးကိုပုလွေကိုင်ခိုင်းသည်။ခမ်းကလီးပျော့ကြီးကိုနွုတ်ခမ်းသားနဲ့အရင်းကနေအဖျားထိကိုက်ပေးလိုက်သည်။”ခမ်းကလီးစုပ်တာအရမ်းကျွမ်းတယ်နော်”ပြောတော့ခမ်းပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ပြီး”ကိုကြီးခမ်းကိုအထင်သေးသွားတာလားခမ်းကကိုကြီးကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်ပေးကြည့်တာခမ်းအိမ်ထောင်ကျခဲ့ပေမဲ့လီးမစုပါဖူးဘူး”လို့သူ ကျေနပ်အောင်ချွေးသိမ့်လိုက်သည်။ ဦးစိုင်းလုကပြာပြာသလဲနဲ့”အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးခမ်း”ဆိုပြန်ပြောသည်။ခမ်းလည်းလီးပျော့ကြီးကိုငုံ ပြီးလီးတောင်ဘို့လီးထဲကသွေးကြောတွေဆီသွေးများများရောက်အောင်ဆက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။လီးပျော့ကြီးမာစပြုတော့လက်နဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းဂွင်းထုပေးနေသည်။ ခါတိုင်းလီးကအဲ့လိုတစ်ချီပြီးနာရီပိုင်းမှာတောင်လေ့တောင်ထမရှိခဲ့ပေမဲ့ခမ်းလုပ်ပေးလို့ခုတောင်နေတာကိုဦးစိုင်းလုအံ့အောနေသည်။ ခမ်းကလည်းလီးတောင်နေတာကျမသွားအောင်ဆက်ပြီးလက်နဲ့ဖွဖွလေးညှစ်ပေးနေလေသည်။”လာအခန်းထဲသွားရအောင်”လို့ဦးစိုင်းလုကပြောပြီးခါးခြင်းဖက်ကာဝင်သွားကြသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ဦးစိုင်းလုရဲ့ကဗျာဆန်ဆန်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီးကားတွေကလှလွန်းလို့ခမ်းစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ဦးစိုင်းလုရဲ့ဒီအိပ်ခန်းထဲကိုဘယ်အလုပ်သမားမှမရောက်ဖူးပါ။သူပြန်ရင်သူ့အိပ်ယာကိုသူဖာသာသိမ်းပြီးပြန်တတ်သည်။ခုတော့ခမ်းကပထမဆုံးရောက်ဖူးသည့်အလုပ်သမားဖြစ်သည်။ ခမ်းရဲ့အကျီကြယ်သီးတွေကိုဦးစိုင်းလုကတစ်လုံးခြင်းဖြုတ်နေလေသည်။ ခမ်းတစ်ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားတော့ဦးစိုင်းလုကသူ့အဝတ်တွေကိုချွတ်သည်။ပြီးကုတင်ပေါ်တက်ပြီးဦးစိုင်းလုကအပေါ်ကတက်ခွကာခမ်းနွုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းသည်။ခမ်းရဲ့လျာနဲ့သာလျာကမြွေတွေမိတ်လိုက်သလိုရစ်ပတ်လှည့်နေသည်။ဒီတခါမှာတော့လွတ်လပ်သည့်အခန်းမို့လားမသိခမ်းတခဏအတွင်းစိတ်ပါလာခဲ့သည်။ဦးစိုင်းလုကခမ်းနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်နဲ့စို့နေပြန်သည်။ခမ်းတကိုယ်လုံးကြက်သီးဖုကြီးတွေထပြီး”အဟင့်ဟင့်ကိုယ်ကြီးနွုတ်ခမ်းမွေးကအူယားစရာကြီးကွာ”ဆိုတွန့်လိန်နေသည်။ ခမ်းလက်နဲ့ဦးစိုင်းလုလီးကိုကိုင်ပြီးကလိပေးလိုက်သည်။လီးကတောင်တယ်ဆိုပေမဲ့မတ်မနေလို့နို့စို့နေတဲ့ဦးစိုင်းလုကိုတွန်းဖယ်ပြီးလီးကြီးကိုစုပ်ပေးလိုက်သည်။လီးထိပ်ကိုဘယ်ပါးစောင်နဲ့ညာပါးစောင်တလှည့်စီထိုးပြီးပွတ်ပေးလိုက်သည်။လီးရည်ကြည်ငံငံလေးတွေစိမ့်ထွက်လာပြီးလီးကတောင်မတ်လာလေသည်။ခမ်းကပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဦးစိုင်းလုအပေါ်တက်ခွကာစောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးဆောင့်ချလိုက်သည်။”အိုးကောင်းလိုက်တာခမ်းရယ်”ခမ်းလည်းအရမ်းထန်နေလို့သတိလွတ်ပြီးဗြစ်ကနဲဆောင့်ချမိလိုက်တာဖြစ်သည်။”ဘွပ်ဗြစ်ဗြိ—ဇိဘွပ်—ဘပ်”နဲ့ခမ်းစိတ်ပါပါနဲ့ဆောင့်နေသည်။”အိုးကိုကြီးရယ်ခမ်းတအားထန်နေပြီတအားကောင်းတယ်အီးဟီးအိုအအ”ဆိုရင်တွင်းခံစားချက်အမှန်နဲ့ခမ်းညီးရင်းဆောင့်နေရှာသည်။သူဆောင့်ချတိုင်းရွုံ့မဲ့သွားတဲ့ဦးစိုင်းလုမျက်နှာကသူပြီးချင်စိတ်ကိုလွုံ့ဆော်နေလေသည်။”ကိုကြီးခမ်းပြီးချင်လာပြီ”ဆိုတဘွပ်ဘွပ်နဲ့အတင်းဖိဆောင့်နေလေသည်။ခမ်းခေါင်းနောက်လန်ကြသွားပြီးရှမ်းစကားနဲ့”စောက်ရမ်းကောင်းတယ်ကွာ”လို့ပြောနေသည်။ခမ်းကခွထိုင်နေရာကဘေးတိုက်ထိုင်ဆောင့်ပြန်သည်။ အပေါ်ကိုဖေါင်းတက်နေတဲ့လီးဒစ်ပိုင်းအပေါ်ကစောက်ပတ်ထဲကန့်လန့်ပွတ်ထိတဲ့ဖီးလ်ကိုယူနေပြန်သည်။အရမ်းထိလို့”ဝေးကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရာကိုကြီးကိုခမ်းလိုးသတ်နေသလိုဖြစ်နေပြီးလားအဟင့်ဟင်း”လို့ပြောသည်။ဦးစိုင်းလုကတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်လိုးနေတဲ့ခမ်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအလွန်သဘောကျနေသည်။အမှန်တကယ်စိတ်ပါနေတဲ့ခမ်းကိုသနားလည်းသနားသွားသည်။ […]
ရန်ကုန်တိုင်း အုတ်ဖို့မြို့လေးမှာ ကုန်းလမ်း ရေလမ်း ပေါက်ရောက်သဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ အုတ်ဖို မြို့စွန် ရပ်ကွက်လေးထဲ ! ဒို့ရိုးရာ … အရက်ဆိုင် ! လေးမှာ အနီးနား ရပ်ကွက်တွေက အစ အကုန်သိနေကြ၏။ အရက်ဆိုင်အား ဦးစီး လုပ်ကိုင်သူမှာ အသက် ၃၄နှစ်ခန့် သဲအိခိုင် ဆိုသော မိန်းမချောတယောက် ဖြစ်သည်။ အရက်ဖြူဆိုင် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုပ် ကြော်လှော်ထားသော အမြည်းစုံလင်စွာဖြင့် ဘီယာနှင့် ရွှမ်ပါ တွဲဖက်ရောင်းချ ပေး၏။ သဲအိခိုင်မှာ အိမ်ထောင်သည် တဦး ဖြစ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပါးနပ်သဖြင့် အရက်ဆိုင်လေးမှာ နေည မပြတ် အမြဲ စည်ကားနေတော့သည်။ အထူးသဖြင့် သဲအိခိုင်၏ လှိုင်းထနေသော နို့အုံများနှင့် လမ်းလျှောက် လိုက်တိုင်း […]
ကြ်န္မဘဝရဲ ့ရင္ခုန္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း, ဆႏၵေတြရဲ ့ျပည့္စံုျခင္း, မွားမွန္းသိေပမယ့္ ဆက္တိုးသြားျခင္ေနမိျခင္း မ်ားျဖင့္ ေရာေထြးေနေသာ စိတ္အာရံုကို ျဖစ္ေပၚသြားေစသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာဆယ့္ငါးႏွစ္ ခန္ ့ၾကာေသာကာလမွ စတင္ခဲ ့ေလသည္။ ကြ်န္မဘဝရဲ ့အိမ္ေထာင္ေရး အထီးက်န္ဆန္လွေသာ ကာလမ်ားမွာ လြန္ခဲ ့ေသာ ဆယ့္ငါးရက္မွ ေရွ့သို ့ေရတြက္ခဲ ့လ်ွင္ သံုးနွစ္နီးနီးခန္ ့ပင္ ရွိေလာက္ပါျပီ။အသက္အားျဖင့္ သံုးဆယ့္ရွစ္ နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ ကြ်န္မ ” မနီနီထြန္း ” သည္ လင္ရွိမယားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးေတာ ့မရွိေသးေပ။ ကြ်န္မထက္ အသက္ ေျခာက္ နွစ္ခန္ ့ၾကီးေသာ ကြ်န္မေယာက်ာ္း ” ကိုတင္ထြန္း ” နွင့္ လက္ထက္ခဲ ့သည္မွာ ရွစ္ နွစ္တာကာလၾကာခဲ ့ေလျပီ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက အေပ်ာ္မက္လြန္းေသာ ေယာက်ာ္းသည္ အိမ္ေထာင္က်ကာစ ငါး နွစ္အတြင္းေလာက္ကေတာ့ကြ်န္မအတြက္ ေပ်ာ္ရြွင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈကို ေပးသည္။
အားရင္အားသလို ကြ်န္မကို ေပြ ့ဖက္, ပြတ္သပ္သည္။ ကာမစပ္ရွက္ျခင္းကို တစ္ပတ္ကို ဆယ္ ၾကိမ္ခန့္ပံုမွန္ေနျဖစ္သည္။ လုပ္သည့္အၾကိမ္တိုင္းတြင္လည္း သူျပီးကိုယ္ျပီး အျမဲတမ္းပင္, ကြ်န္မတို ့ကေလးမရေပမယ့္လဲ ေပ်ာ္ရြွင္ခဲ ့ၾကသည္။ ခုေနာက္ပိုင္း သူ ့အသက္ ေလးဆယ့္ႏွစ္ ေက်ာ္မွစကာ ကြ်န္မကို ဂရုစိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အျပင္မိတ္ေဆြမ်ားနွင့္ ေပ်ာ္တတ္လာျပီး အိမ္ျပန္ေရာက္လ်ွင္ ကြ်န္မကို ဂရုစိုက္မႈ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းလာကာ ကာမကိစၥကို တပ္ တစ္ၾကိမ္ပင္ မမွန္ေတာ့, ကြ်န္မ ဆႏၵရွိေနလို့သူ ့ကိုဆြလ်ွင္ေတာင္ သူ ့လီးမွာ သိပ္မေတာင္ခ်င္, ဇြတ္ဆြေပးလို ့ေတာင္လာလ်ွင္လည္း ကြ်န္မကသာ အေပၚက အျမဲတမ္း တက္ေဆာင့္ေပးရသည္။ သူ၏ အားစိုက္မႈမွာ လံုးဝမရွိေတာ့, ခဏတိုင္း ကြ်န္မေဆာင့္ေပးေနရင္း သူ ့လီးမွာ ေပ်ာ့ညိႈးသြားသည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ပင္။ ကာမကိစၥကို ကြ်န္မ မျပည့္ဝေပမယ့္ သူ ့လီးသည္ အျပင္အေပါင္းအသင္းမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္ငယ္ေလးမ်ား ထိေတြ ့ေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားလည္း ကြ်န္မ သိသိလာျပီ။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သူ ့လီးသည္ ပန္းမေသပါ, ကြ်န္မအေပၚထားေသာ အာရံုေတာ ့ေသသြားျပီဟု ကြ်န္မ သံုးသက္မိသည္။ ထိုစဥ္ကာလမွစ၍ အိပ္ခန္းထဲရွိ ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ေရွ့တြင္ ေဘးတေစာင္းရပ္ကာ အထက္ဆံပင္မွစ၍ ေအာက္ေျခေထာက္အဆံုး ေန ့တိုင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသခ်ာျပန္ၾကည့္မိသည္။ ညေနဆိုင္သိမ္းျပီး အိပ္ခန္းထဲကမွန္ေရွ့စရပ္လ်ွင္ ပထမ ေန ့ခင္းအလုပ္ခ်ိန္ဝတ္ထားေသာ ဝမ္းဆက္အေရာင္ ထမိန္စကက္ စကက္ဒူးအေပၚအတိုတို ့ျဖင့္ စမတ္က်လွေသာ ကြ်န္မပံုစံကို ဆယ္မိနစ္ မိနစ္ခန့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသခ်ာၾကည့္လိုက္သည္။ ျပီးလ်ွင္ ညေနခင္း ေရခ်ိဳးေတာ ့မွာမို ့အဝတ္အစားမ်ားကို အထက္ကေန ခြ်တ္ခ်လိုက္ျပီး မိမိရင္သားကို ေသခ်ာၾကည့္သည္, ျပီးလ်ွင္ လက္ျဖင့္ နို ့သီးေခါင္းကို ပြတ္သပ္ကိုင္ၾကည့္သည္, ကေလးမေမြးဘူးေသာ ကြ်န္မအတြက္ေတာ့အပ်ိဳနို ့ကဲ ့သို့မပ်က္စီးေသး, ခါးနဲ ့ဗိုက္က နဲနဲဝသလိုရွိေပမယ့္ ” ငါး ေပ ရွစ္ လက္မရွိေသာ အရပ္ရွိေလေတာ့ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၾကည့္လို ့ေကာင္းသလို ျမင္မိသည္။
မွန္ဘက္ကို မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္လွည့္လိုက္ျပီး ေဘးကုတင္ေပၚ ေျခေထာက္တစ္ဖက္တင္ကာ အေမြွးမ်ားနွင့္ ကြယ္ေနေသာ မိမိေစာက္ဖုတ္ကို လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ျဖဲကာ က်န္လက္တစ္ဖက္မွ လက္ခလယ္ျဖင့္ အေပၚကစျပီး ေစာက္စိကို ပြတ္ကာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေစာက္ပတ္အေပါက္ထဲကို ထည့္လိုက္ျပီး ကလိေနမိသည္။ ေယာက်ာ္းလုပ္တာ အၾကိမ္ေတာ္ေတာ္က်ဲလာေသာ ေစာက္ပတ္အဝသည္ က်ဥ္းသလိုရွိလာကာ လက္ေခ်ာင္းနွစ္ေခ်ာင္းနွင့္ ကလိလ်ွင္ ၾကပ္သလို ခံစားရသည္။ အရည္မ်ား နဲနဲထြက္လာလ်ွင္ လက္ကလိတာကို ရပ္လိုက္ျပီး ေျခေထာက္ကို အစံုရပ္လိုက္ကာ မွန္ေရွ့တြင္ ျဖည္းျဖည္းတစ္ပတ္လွည့္လိုက္သည္။ အသားအေရ ျဖဴေသာမိန္းမမ်ားထဲတြင္ ကြ်န္မ ပါသည္, အျမဲထိုင္ရေသာ ဖင္အဆံုေတာင္ ျဖဴပါေသးသည္။ အားလံုးျခံဳေျပာရရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေက်နပ္သည္, ဒါေပမယ့္ စိတ္ခံစားမႈ ကာမတဏာအတြက္ မျပည့္ဝသည္ကိုေတာ့ကြ်န္မ မေက်နပ္ေပ။
သူမလုပ္ေပးသည္ကို မတတ္နိုင္, ကိုယ့္ဆႏၵျပည့္ဖို့တိတ္တခိုးဝယ္ထားေသာ လီးတုဆိုဒ္ သံုး မ်ိဳးနွင့္ အစိက်ဥ္စက္ ႏွစ္ခုကို ခုတင္ေအာက္မွ ထုတ္ကာ မွန္ျဖင့္ျမင္နိုင္ေသာ ခုတင္ေပၚတြင္ ထိုင္ကာ ေပါင္ကိုကား, လီးတုနွင့္စက္ျဖင့္ နွစ္ပါးသြားကာ ျပီးခဲ ့ရသည္မွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ႏွစ္ နွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ ့ေလျပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္ငါး ရက္ရဲ့ပထမရက္တြင္ ပံုမွန္မနက္ ကိုးနာရီဖြင့္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကြ်န္မ၏ ေဂါက္ ဆိုင္ကို ဖြင့္လိုက္ျပီး ေကာင္တာတြင္ထိုင္ကာ ေဖ့ဘုတ္ သံုးလိုက္ , ရွယ္ လုပ္ထားေသာ ကာမဇာတ္လမ္းဖတ္လိုက္, ဆက္စ္ဗြိဒိယို မ်ားကိုၾကည့္လိုက္ျဖင့္ ညေနက်ရင္ မိမိဘာသာ စိတ္ကူးယဥ္ကလိဖို့ကုန္ၾကမ္းရွာေနမိသည္။ ထိုစဥ္ ဆိုင္မွန္တစ္ခါးဖြင့္သံနွင့္အတူ ေယာက်္ား သံုး ေယာက္ ဝင္လာသျဖင့္ ကြ်န္မလည္း အျပံဳးနွင့္ ဆီးၾကိဳလိုက္သည္။ ေရွ့နွစ္ေယာက္က နိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ေနာက္တစ္ခါျပန္ၾကည့္မိသည္, စိတ္ထဲတြင္ သိဘူးသလိုလို စဥ္းစားမိသည္။ ခပ္ၾကာၾကာၾကည့္မိေနေသာ ကြ်န္မကို သူသတိထားမိျပီး ျပန္ျပံဳးျပေနသည္။ သူစကားစေျပာသည္ ” ဒီနိုင္ငံျခားသားနွစ္ေယာက္က သူတို ့လိုတာေလးေတြ လာဝယ္တာ, ဒီက အမ်ိဳးသမီးက လိုက္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ် ” ” ဟုတ္ကဲ ့ပါရွင့္ ” ဟု ေျပာကာ နိုင္ငံျခားသားသြားရာေနာက္သို့ခပ္သြက္သြက္ လိုက္သြားမိသည္။ ထိုအခ်ိန္ ကြ်န္မစိတ္ထဲမွာ သူ ့မ်က္လံုးေတြ ကြ်န္မေနာက္ပိုင္းကိုယ္ကို ၾကည့္ေနေစခ်င္မိသည္။ ဝယ္မယ့္ပစၥည္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ စကားျဖင့္ ရွင္းျပရင္း ေဘးတိုက္အေနအထားခပ္ေဝးေဝးတြင္ ရွိေသာ သူ ့ကို ဖ်က္ခနဲ လွမ္းၾကည့္လို္က္မိသည္။ အျပံဳးမ်က္နွာျဖင့္ ကြ်န္မကိုၾကည့္ရင္း မ်က္စျပစ္ျပေနေသာ သူ ့ပံုစံက ကြ်န္မစိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုဝင္လာသလို ခံစားမိသည္။ တစ္ျပိဳင္တည္း ဘယ္လက္တြင္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ မဂၤလာေဆာင္လက္စြပ္ကို သူမျမင္ရေအာင္ ဝွက္ထားမိသြားသည္။
လိုခ်င္တာဝယ္ျပီးသြားေသာ နိုင္ငံျခားသားနွစ္ေယာက္သည္ သူ ့ကို လက္ဟန္ေျခဟန္ျပျပီး ဆိုင္အျပင္ ထြက္သြားေတာ ့သည္။ ေကာင္တာသို ့သြားရင္း ကြ်န္မမ်က္ဝန္းထဲတြင္ သူနဲ ့လူျခင္းနီးလာမႈေၾကာင့္ အရင္အပ်ိဳဘဝတုန္းက ရင္ခုန္မႈမ်ိဳးလို ခံစားေနမိသည္။ ” ကြ်န္ေတာ္တို့အရင္ကေတြ ့ဆံုဘူးသလား အမ်ိဳးသမီး, စိတ္ထဲ ေဝဝါးေနလို့ေမးၾကည့္တာပါ ” ” ဟုတ္ကဲ ့ပါ အစ္ကို, မဆံုဖူးတာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္, ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မစိတ္ထဲမွာ ရင္းနွီးေနသလိုပဲေနာ္ ဒီျမိဳ ့ကပဲလား ” ” မဟုတ္ဘူး ဇာတိကေတာ့လားရႈိးၿမိဳ ့နယ္ထဲက လက္ရွိကေတာ့ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ေလ, အန္ဂ်ီအို အဖြဲ ့မွာ အလုပ္ဝင္ေနတာ , ဝါသနာပါလို ့ေလ ” ” ဟင္ အဲဒါဆို အစ္ကို ့မိသားစု ဘယ္လိုေနမလဲ ” ေမးမိသြားသည္။ ကြ်န္မစိတ္ထဲတြင္ ဘာအတြက္နဲ ့ဘာကိုသိခ်င္ေနမိသလဲ မသိ။ ” ဒီက အမ်ိဳးသမီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို အထင္ႀကီးလြန္းေနၿပီ, လူလြတ္ လူပ်ိဳႀကီးပါဗ်ာ, အသက္ေတာင္ ေလးဆယ့္တစ္ ႏွစ္ထဲေရာက္ေနၿပီ, မယူခ်င္ေတာ ့ဘူး “။
အဲ ေဆာရီး အစ္ကို, ဒါနဲ့ကြ်န္မကို ညီမ လို႔ေခၚခ်င္ေခၚ, ဒါမွမဟုတ္ နာမည္က ” နီနီထြန္း ” လို ့ေခၚ, ၿပီးေတာ့ ေျပာရအံုးမယ္ ကြ်န္မအသက္က သံုးဆယ့္ရွစ္ပဲ ရွိေသးတာ,အသက္ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ ့ပံုေပါက္ေနလို ့လား ” ဟု ခက္သြက္သြက္ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို နဲနဲတင္းတင္းေကာ ့ေကာ ့လုပ္လိုက္သည္။ သူ ့အၾကည့္မ်ားသည္ ကြ်န္မကိုယ္လံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အကုန္ျခံဳၾကည့္ေနၿပီး ” ဟုတ္ပါၿပီ ေျပာင္းေခၚပါ ့မယ္, ဟုတ္ၿပီေလ , နီနီ လို ့ေခၚမယ္ သေဘာၾကလား ” ။ ကြ်န္မကို ေျပာလိုက္ေသာ သူ ့စကားေၾကာင့္ လက္မွာဝတ္ထားေသာ မဂၤလာေဆာင္လက္စြပ္ကိုပင္ ခြ်တ္ပစ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ သေဘာၾကသြားပါသည္။လြတ္လပ္ေသာ အျပံဳးမ်ား ႏွစ္ေယာက္လံုး ျပံဳးမိၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကားတစ္စီး ဆိုင္ေရွ႕ရပ္လာၿပီး ကြ်န္မေယာက်ာ္းေရာက္လာသည္။ ရီေနေသာ ကြ်န္မမ်က္ႏွာ တည္သြားသည္ကို သူသေဘာေပါက္သြားကာ ေငြရွင္းျခင္းအပိုင္းကို စတင္လိုက္သည္။
အထဲဝင္လာေသာ ေယာက်ာ္းသည္ နႈတ္ဆက္ကာ ေနာက္ထဲကို အိမ္သာ ဝင္သြားသည္။ အခ်ိန္နဲေနေသာ ကြ်န္မတို ့ႏွစ္ေယာက္အဖို့အဆက္အသြယ္ေလးေတာ့ကြ်န္မစိတ္ထဲ ရွိေနခ်င္မိသည္။ ” အစ္ကိုေဖ့ဘုတ္ သံုးလား, ခင္ထားရေအာင္လို ့ေလ , အဆက္အသြယ္ေလး ရွိေနေအာင္လို့” ” သံုးပါတယ္ နာမည္က ဦးကိုကို , ကြ်န္ေတာ္ပံုနဲ ့ပဲ ရွာၿပီးအပ္လိုက္ေတာ ့ေနာ္ သူတို ့ေစာင့္ေနလို ့တာၾကာၿပီ , သြားေတာ ့မယ္ ” ထြက္သြားေသာ သူ ့ေက်ာျပင္ကို ၾကည့္ရင္း ေပ်ာ္သလိုလို, လြမ္းခ်င္သလိုလို ခံစားမိသည္။ ခဏေန ေနာက္ထဲမွ ျပန္ထြက္လာေသာ ေယာက်ာ္းသည္ ကြ်န္မဖင္ကို ဆြဲညႇစ္ကာ ” မိန္းမ ညက်ရင္ ေနာက္က်မယ္ တံခါးေတြ ေသခ်ာပိတ္ေနာ္ ” မွာၿပီး ျပန္ထြက္သြားသည္။ ကြ်န္မလည္း ဖုန္းကိုယူၿပီး ဖရန့္ရွာေဖြရာ ျဖင့္ “ဦးကိုကို ” ဟု႐ိုက္ရွာလိုက္သည္။ စမတ္က်လြန္းေသာ သူ ့ပံုကိုေတြ ့ေတာ ့ကြ်န္မအပ္လိုက္သည္။
ဆက္စ္အေၾကာင္း, ကာမအေၾကာင္း, အျပာစာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း မ်ားမ်ား လိုက္ရွယ္ လုပ္ထားေသာကြ်န္မရဲ့” နီနီ ” ဆိုေသာ သီးသန္ ့ဓာတ္ပံု အမွားႏွင့္ တင္ထားေသာ အေကာင့္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ မက္ေဆ့ေဘာက္ မွ အက်ၤ ီလက္ျပတ္, အက်ပ္ဝတ္ၿပီး ႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ပို႔ထားေပးလိုက္သည္။ ဆိုင္သိမ္းၿပီး ထံုးစံအတိုင္းအခန္းထဲဝင္, မွန္ေရ႔ွသြား, ၿပီးလွ်င္ ခံစားမႈကို စက္ႏွင့္ေျဖေဖ်ာက္ရင္း ပံုမွန္လုပ္ေနၾက ကိစၥမ်ားကို ကြ်န္မ ျပဳလုပ္ျဖစ္သည္။ အခုတစ္ႀကိမ္ တစ္ခုေျပာင္းသြားသည္က ကြ်န္မစိတ္ကူးယဥ္မိေသာ ဇာတ္လိုက္မွာ ” ဦးကိုကို ” ။ ” ဟိုင္း နီနီ မဂၤလာပါ ” ဟု ေဖ့ဘြတ္တြင္ မတ္ေဆ ့ဝင္လာသည္။ ပရိုဖိုင္ ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ဦးကိုကို ျဖစ္ေနသည္။ ကြ်န္မေပ်ာ္သြားသည္။ စာျပန္မေရးေတာ ့ပဲ ဓာတ္ပံုခ်က္ျခင္း႐ိုက္ၿပီး ျပန္ပို ့ေပးလိုက္သည္။ “အခုဘာလုပ္ေနလဲ နီနီ ” ” တစ္ေယာက္ထဲေပါ့ ကိုကို, လာမလို ့လား” ဟုကြ်န္မလည္း သူ ့နာမည္ကို အဖ်ားဆြတ္ေခၚလိုက္သည္။
မအားေသးပါဘူး ဒီေန ့အလုပ္ရႈပ္အံုးမွာ , မနက္ျဖန္ အစ္ကိုအလုပ္ရွင္ ႏိုင္ငံျခားက ေဂါက္ ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆံုးေန ့ေလ, သူက ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ ့ကို သြား႐ိုက္ရမွာ , အဲက်မွ ေနခဲ ့မွာ လာခဲ ့မယ္ေလ ” ” ဟုတ္ပါၿပီ ကိုကို, ဖုန္းႀကိဳဆက္လိုက္ေနာ္ ” ဟု ေျပာကာ ေစ်းလိုက္ဝင္လာသျဖင့္ ဖုန္းခ်ထားခဲ ့လိုက္သည္။ ဒီလိုနဲ ့တစ္ေန ့ကုန္ျပန္ၿပီး ညဆယ္နာရီ ေက်ာ္ေလာက္တြင္ ေယာက်ာ္းျပန္လာၿပီး မူးလာကာ အခန္းထဲေရာက္ၿပီး တန္းအိပ္ေပ်ာ္သြားေလသည္။ မနက္ ခြန္နာရီေလာက္ ေယာက်ာ္းအိပ္ယာမွ ထလာၿပီး ကြ်န္မကို ” မိန္းမေရ ကိုယ္အခု ေနျပည္ေတာ္ တစ္ညအိပ္သြားရမွာ ၿပိဳင္ပြဲလူႀကီး စရင္းထဲ ပါေနတယ္, အိမ္ကို ဂ႐ုစိုက္ေနာ္ ” ဟု အသိေပးတဲ့သေဘာမ်ိဳးေလာက္သာ ေျပာကာ အိတ္ဆြဲၿပီး ထြက္သြားသည္။ ဦးကိုကို ကို ညစာႏွင့္ ဧည့္ခံပါမည္, အိမ္ထမင္းဟင္းခ်က္ေကြ်းပါမည္ဟု ေျပာထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါစြါႏွင့္ ခ်က္ျပဳပ္လိုက္သည္။
ညေနေစာင္းလာသျဖင့္ ေရခ်ိဳးရင္း တစ္ကိုယ္လံုးကို ဆပ္ျပာ အခါခါေဆးလိုက္သည္။နဲနဲမဲၿပီးရွည္ေနေသာ ေစာက္ေမႊးမ်ားကို အကုန္ရွင္းေအာင္ ရိတ္ျပစ္လိုကသည္။ ၿပီးလွ်င္ ပန္းႏုေရာင္ အဝတ္ပါးပါး ဂါဝန္ဝမ္းဆက္ကို ဝတ္လိုက္ၿပီး ကိုယ္လံုးေပၚ မွန္ေ ့ရွတြင္ ရပ္ကာ တစ္ပတ္လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္ ။ ကြ်န္မစိတ္တြင္ ဒီညႏွစ္ေယာက္ထဲရွိေနေသာအခါတြင္ ကိုကို႔စိတ္ထဲတြင္ ကြ်န္မကို အမွတ္ရေစခ်င္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ထမင္းစာပြဲကို ေသခ်ာျပင္လိုက္သည္။ သိပ္မေစာင့္လိုက္ရပါ , ကိုကိုေရာက္လာၿပီး ဆိုင္ထဲဝင္လာသည္။ သူ ့လက္ထဲမွ ကိုင္လာေသာ အနီေရာင္ ႏွင္းဆီပန္းစီးကို ကြ်န္မကိုေပးရင္း ” ေရာ့ဒီမွာ နီနီ အတြက္ ႏွင္းဆီနီနီေလးေတြ,အမွတ္တရေပါ ့” ” ေက်းဇူးပါ ကိုကို, ထမင္းစားၾကရေအာင္ေနာ္ ” ဟု ေျပာကာ ထမင္းစားပြဲတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္လိုက္ၾကသည္။ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာရင္း ထမင္းစားၾကသည္။
နီနီ, ဟိုေန႔က နီနီ အမ်ိဳးသားလားဟင္ ” . ကိုကိုကေမးလာေတာ ့လဲ ပြင့္လင္းစြာပဲ ” ဟုတ္တယ္ ကိုကို , သူ ့ကိုသိလို ့လား ” “ေလး ခါေလာက္ေတာ့ဆံုဘူးတယ္, သေဘာေကာင္းပါတယ္, ေပ်ာ္တတ္တယ္ “. ကြ်န္မလည္း ခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ခ်င္တာနဲ႔ပဲ ” သူ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္တတ္မႈေတြဟာ အိမ္ရဲ႕အျပင္ဘက္ေတြမွာပါပဲ, မိန္းမျဖစ္တဲ ့ကြ်န္မကို ဂ႐ုမစိုက္တာ ႏွစ္နဲ႔ကို ခ်ီၾကာေနၿပီ ကိုကို, ညည့္နက္မွ ျပန္ေရာက္တယ္, ေရာက္ရင္ တန္းအိပ္ေတာ ့တာပဲ, ကြ်န္မကိုေတာင္ ျပံဳးမျပႏိုင္ရွာဘူးေလ, ကြ်န္မဘဝက အထီးက်န္ေနတာ ၾကာလွပါၿပီ ကိုကို , အခု ကိုကို နဲ ့ခင္မင္ခြင့္ရလာမွ နဲနဲေပ်ာ္လာတာ, မသိခင္တုန္းကဆို ကြ်န္မက ေဖ့ဘုတ္ နဲ ့ပဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းရတာပဲေလ, ထပ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုကို” ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ” ဟုတ္ပါၿပီ နီနီရယ္, အားတိုင္း လွမ္းဆက္ပါမယ္, မတ္ေဆ ့လည္းပို ့ပါ ့မယ္, ဒါနဲ ့နီနီ အမ်ိဳးသားေတြ႕သြားရင္ ဇာတ္ရႈပ္ကုန္အံုးမယ္ေနာ္ “။
အမယ္ေလး သူကျဖင့္ ကြ်န္မ ဖုန္း မေျပာနဲ့လူေတာင္စိတ္မဝင္စားေတာ ့ဘူး, ၾကာေပါ ့” ဟု ကိုကို႔ ကို မ်က္ေစာင္းလွလွေလးထိုးကာ ကြ်န္မ ေျပာလိုက္သည္. အၾကည့္ခ်င္းဆံုစြာ အခ်ိန္ၾကာသြားသည္. ” နီနီ ဒီတစ္ခါ ဒီၿမိဳ႕လာရတာ ေပ်ာ္လိုက္တာ , ေနာက္လဲ အၿမဲလာမယ္ေနာ္ ရတယ္မို႔လားဟင္ ” ” သိပ္ရတာတာေပါ့ဖုန္း ႀကိဳဆက္ေလ အားေအာင္လုပ္ထားလိုက္မယ္, ကိုကို အခ်ိန္ရရင္ အျပင္ေတာင္ ေလ်ာက္လည္လို႔ရေသးတယ္, ဟုတ္ၿပီလား ” ” ယံုပါတယ္ နီနီ, ကဲ အခ်ိန္က ဆယ္နာရီ နာရီ ထိုးၿပီ ညည့္နက္ေနၿပီ, စားလို႔လဲ ၿပီးၿပီ, ေကာင္းတယ္ ေက်းဇူးပဲ နီနီ အစ္ကို ျပန္ေတာ့မယ္ေလ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာမယ္ဆို ႀကိဳဖုန္း ဆက္မယ္ေလ “ဟု ကိုကို ေျပာလာသည္. ကြ်န္မ ကိုကို မလာခင္ စိတ္ကူးယဥ္ထားမႈသည္ သူႏွင့္ကြ်န္မ အိပ္ခန္းထဲမွာ စိတ္တူကိုယ္တူ ခ်စ္တင္းေႏွာၾကေသာ ပံုစံမ်ိဳး, ယခု ကိုကိုက ျပန္ေတာ့မယ္ဟု နႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္သြားမည့္ပံုစံမ်ိဳးကို ကြ်န္မစိတ္ထဲတြင္ မလိုခ်င္ပါ။
ကိုကို ဘက္က စလာႏိုးႏွင့္ ေစာင့္လိုက္တာ သူျပန္ေတာ့မယ္ဟု ႏွတ္ဆက္သည့္ အခ်ိန္ကို ၾကံဳလာသည္. ကြ်န္မ ဘဝတြင္ စိတ္ကူးနဲ႔ ႐ူးသည္,ဆက္စ္အေကာင့္ မ်ားကို လိုက္လုပ္ လုပ္ၿပီး ဝင္ၾကည့္သည္, ေယာက်ာ္း မသိေအာင္ ဝယ္ထားေသာ လီးတု ဆိုဒ္စံု သံုး ေခ်ာင္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အာသာေျဖသည္. ယခု ကိုကိုနဲ႔မွ စိတ္အားထည့္ကာ လက္ေတြ႕ကာမ ကိစၥအတြက္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္. ကြ်န္မအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ဖို႔မွာ ဒါပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္, ယခု ကိုကို ျပန္ေတာ့မည္ ဆိုေတာ့ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိပဲ စိတ္ရႈပ္စြာ ကိုကို႔ ကိုၾကည့္ေနမိသည္. မတ္တပ္ရပ္ေနေသာ ကိုကို က ” နီနီေရ ကိုကို အိမ္သာသြားခ်င္လို႔ ” . ကြ်န္မ သတိျပန္ဝင္လာကာ ” ဟုတ္ ကိုကို ဒီလမ္းတိုင္းပဲ, အိမ္သာက အိပ္ခန္းထဲမွာ သြားေလ ရပါတယ္ ” ” ေကာင္းပါ ့မလား နီနီ သူမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္သည္ အခန္းထဲကိုေလ ” ” သြားပါ ကိုကိုရယ္ နီနီ တို႔က သူစိမ္းေတြမွ မဟုတ္ေတာ ့တာကို “။
” ကဲ ဟုတ္ပါၿပီ ” ဟုေျပာကာ ကိုကို ကြ်န္မတို႔ အိပ္ခန္းထဲကို ဝင္သြားသည္. ကြ်န္မလည္း စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိေပ, ထိုစဥ္ လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္သြားၿပီး တစ္အိမ္လံုးေမွာင္သြားသည္. ” ဟယ္ ကိုကို မီးပ်က္သြားၿပီ ရရဲ႕လားဟင္ ” ဟုေအာ္ေမးလိုက္သည္. ” ရတယ္ နီနီ, ကိစၥၿပီးၿပီ ထြက္လာေတာ့မွာ ” ” ဟုတ္ ကိုကို , နီနီကို မီးစက္ေလး ကူနႈိးေပးပါအံုးေနာ္ ” ” ရတယ္ေလ မီးစက္က ခုဏ ဒီေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ မို႔လား, ထမင္းစားပြဲေပၚမွာ ကိုယ့္ ဖုန္း ရွိတယ္ နီနီ ယူခဲ့ပါလားဒီထဲကိုေလ ” ” ဟုတ္ ကိုကို ” ဟု ဆိုကာ ကိုကို႔ဖုန္းကို ယူကာ ဖုန္းမီးဖြင့္ဖို႔ စကရင္ ကို ႏွိပ္လိုက္သည္တြင္ ကြ်န္မသူ႔ဆီ မတ္ေဆ့ပံုပို႔ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ျမင္လိုက္ရသည္. ကြ်န္မ ေပ်ာ္သြားၿပီး လမ္းေလ်ာက္လိုက္ရာ ေနာက္ထဲက ထိုင္ခံုတစ္လံုးႏွင့္ ကြ်န္မဒူးေခါင္းတိုက္မိသြားရာ ” အေမးေလး ” ဟုေအာ္မိလိုက္သည္။ ” နီနီ ဘာျဖစ္တာလဲ ရလား ” ” ရတယ္ လာၿပီဟု ေျပာကာ မီးဖြင့္ၿပီး ကိုကိုဆီသြားလိုက္သည္။
ကိုကို ကမီးစက္နႈိးေပး၍ မီးလင္းသြားသည္။ ကြ်န္မကိုကို႔ ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔ေဘာင္းဘီေတြ ေရေတာ္ေတာ္ရႊဲေနသည္, ၿပီးေတာ့ ေဘာင္းဘီဇတ္လည္း မဆြဲရေသး။ ” အဲ ကိုကိုေဘာင္းဘီေရရႊဲေနၿပီ တစ္ခုခုလဲလိုက္, ကြ်န္မေပးမယ္ ” ဟု ေျပာကာ ဘီတိုဆီလာခဲ့သည္။ ” ရတယ္ နီနီ ကိုကိုျပန္မွာပဲ ထားလိုက္ပါ ” ။ ကိုကိုေျပာတာနဲ႔ သူ႔ဘက္ကို ျပန္လွည့္ေျပာမည္အျပဳတြင္ ” ဟာ နီနီ႔ ဒူးမွာ ေသြးထြက္ေနတယ္, ခုတင္ေပၚ ထိုင္လိုက္, အစ္ကို ေဆးထည့္ေပးမယ္ ေဆးရွိလား ” ” ရွိတယ္ ဟိုမွာ ” ေျပာလိုက္ၿပီး ထိုင္ေနလိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ ကြ်န္မ နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခံုယူထိုင္လိုက္ၿပီး ဒူးေပၚ ဖံုးေနေသာ ကြ်န္မ စကက္ကို နဲနဲလွန္လိုက္ၿပီး ေဆးရည္ စတို႔ေပးသည္။ ကြ်န္မ စပ္လို႔ ” အမေလး ကိုကို ” ဟု ေအာ္ကာ ကို႔ကို႔လက္ကို ဆြဲထားမိသည္။ ” မနာပါဘူး နီနီရဲ႕ ေပ်ာက္ပါၿပီ ” ” လန္႔သြားလို႔ပါ ကိုကို, ဒါနဲ႔ ျပန္ေတာ့မွာလားဟင္ ” “ဘာလို႔လဲ နီနီ , ကိုကို ဘာကူညီေပးရအံုးမလဲ ေျပာပါ “။
ကြ်န္မ ခဏေတြးေနမိသည္, စိတ္အလိုမၾက ျဖစ္မိသည္။ ထိုစဥ္ ” နီနီ ဘာေတြးေနတာလဲ , ဘာကူညီရမလဲလို႔ ေမးေနတာေလ”။ ကြ်န္မလည္း လန္႔သြားၿပီး ” ဟိုေလ…. ဟိုေလ….. ကိုကို အခုည မျပန္ခင္ ကြ်န္မကို ခ်စ္ေပးခဲ့ပါလားဟင္, ကြ်န္မ လိုအပ္ေနလို႔ပါ, ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ , ရွက္လည္းရွက္မိပါတယ္ ” စကားလံုးမ်ား ဆက္တိုက္ေျပာကာ အိပ္ရာေပၚ ေနာက္ျပန္လွဲအိပ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ေစာင္နဲ႔အုပ္လိုက္သည္။ ႏွလံုးခုန္သံေတြ ကြ်န္မရင္ထဲ ျမန္လြန္းေနသည္, ထူပူဆူေနၿပီ, မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ခဏၾကာေတာ့ ကြ်န္မ စခံစားမိသည္မွာ ကြ်န္မဝတ္ထားေသာ စကက္တိုေလး ေျဖးေျဖးခ်င္း အေပၚသို႔ လန္လာသည္။ ေနာက္ၿပီး ကိုကို႔ လက္ႏွစ္ဖက္က စကက္ေအာက္မွ ဝင္လာကာ ကြ်န္မအတြင္းခံေဘာင္းဘီေလး ဆြဲခြ်တ္သြားသည္ဟု ခံစားရသည္။ ကြ်န္မလည္း ေခါင္းအုပ္ထားသည္ကို မဖယ္ပဲ ၿငိမ္ေနသည္, ရင္ခံုသံေတြေတာ့ ျမန္ေနသည္။
ကိုကို႔ဆီမွလည္း စကားေျပာသံ မၾကားရေပ ၿပီးလွ်င္ ကြ်န္မ ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ကိုကို႔လက္ႏွစ္ဖက္က ၿဖဲကားလိုက္ၿပီး ေပါင္ရင္းအဆံုရွိ ကြ်န္မ ေစာက္ပက္ရဲ႕ ဟိုဘက္သည္ဘက္ကို ညင္သာစြာ ဆြဲၿဖဲေနသည္။ ကြ်န္မလည္း ဘယ္အခ်ိန္ ေစာက္ပက္ထဲ ဝင္လာမည္ျဖစ္ေသာ ကိုကို႔ လီးရဲ႕ ဆိုဒ္ ကို စိတ္ထဲတြင္ ခန္႔မွန္းေနမိသည္, ေစာင္ကိုေတာ့ ကြ်န္မ မဖယ္မိေပ။ ကြ်န္မရဲ႕ ေစာက္စိေလးကို ကလိေပးသလို ခံစားရသည္, ေကာင္းသည္, အရသာရွိသည္, ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ လက္နဲ႔လုပ္သည္ထက္ကို ကိုကို လုပ္ေပးတာ ပိုခံလို႔ေကာင္းသည္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မ ေသခ်ာခံစားၿပီး စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ ေစာက္စိကို ဆြေပးေနတာဟာ ကိုကို ၏ လက္ႏွင့္ လီး မဟုတ္ႏိုင္ဟု ထင္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ဖံုးထားေသာ ေစာင္ကိုလွန္ကာ ေခါင္းေထာင္ၾကည့္လိုက္သည္။ ကြ်န္မ ျမင္ကြင္းတြင္ ကိုကို႔ ေခါင္းသည္ ကြ်န္မေပါင္ၾကားတြင္ ေရာက္ေနၿပီး မ်က္လံုးမ်ားကို မွိတ္ကာ သူ႔လွ်ာျဖင့္ ေစာက္စိကို အသာအရာေလး လ်က္ေပးေနသည္။
အံ့ၾသ, အားနာသြားကာ ကြ်န္မလည္းေပါင္ကို ဆြဲစိၿပီး ႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္။ ဒါေပမယ့္ မရပါ , ကိုကို႔ လက္ႏွစ္ဖက္က ဆြဲခ်ဳပ္ထားသည္။ ကြ်န္မလည္း လွန္သြားၿပီး ” ကိုကို အဲသလို မလုပ္ပါနဲ႔ ငရဲ ႀကီးပါလိမ့္မယ္, အားလည္း နာလို႔ပါ ေတာ္ပါေတာ့ ” ကိုကိုလည္း မ်က္လံုးဖြင့္လာကာ ” နီနီ , ကိုယ္လုပ္ေပးတာ မေနတတ္လို႔လား ” ” မသိဘူး, အားနာလို႔ပါ, မလုပ္လဲရပါတယ္ ,ကြ်န္မ အရည္ကထြက္ေနၿပီ လုပ္လို႔ရၿပီ ကိုကို ” ” ဟုတ္ပါၿပီ ကိုယ္ကိုက လ်က္ခ်င္ေနတာ အေမႊးေတြ ေျပာင္ေနေတာ့ နီနီ ေစာက္ပက္က ထင္းေနတာ ျပန္အိပ္ေနေနာ္ ” ဟု ေျပာကာ ေစာက္ပက္ ကို ဆက္ၿပီးလွ်က္ေနသည္။ ဆယ့္ငါး မိနစ္ခန္႔ၾကာေတာ့ကြ်န္မ ခံစုးခ်က္ျပင္းထန္လာသည္။ ” ကိုကို ေတာ္ေတာ ့ေနာ္ ကြ်န္မ ၿပီးခ်င္လာၿပီ လုပ္ၾကစို႔ေနာ္ ” ” ၿပီးလိုက္ေလ နီနီ ” ဟု ေျပာကာ ႏွာေခါင္းပါ ျမဳပ္လုနီးပါး တိုးကပ္ကာ ကိုကို လွ်ာက အားထည့္ၿပီး လွ်က္ေနေလသည္။
” ကိုကို ေတာ္ပါေတာ့ ၿပီးသြားလိမ့္မယ္ , အရည္ေတြ ပိုထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ” ” ကိုယ္က အဲဒီ အရည္ကို ႀကိဳက္တယ္ ၿပီးခ်င္ၿပီးလိုက္ “ဟုေျပာကာ မနားတမ္း လွ်က္ေတာ့သည္။ ကြ်န္မလည္း မခံစားႏိုင္ေတာ့ပဲ ကိုကို လွ်က္, ကြ်န္မကလည္း ဖင္ႀကီးကို ေကာ့ေကာ့ေပးကာ ကိုကို႔လွ်ာရက္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ခါၿပီးသြားသည္။ အစကတည္းက အားတင္းထားရသျဖင့္ ေမာသြားကာ ကြ်န္မ ၿငိမ္ေနမိသည္။ ” ေကာင္းလား နီနီ, လီးနဲ႔လုပ္တာနဲ႔ ဘာကြာသလဲဟင္ ” ဟု ေျပာရင္း ကိုကို က သူ႔ အဝတ္အစားမ်ားကို အကုန္ခြ်တ္ေနသည္။ ” ဒီလို လွ်ာနဲ႔ေတာ့ တစ္ခါမွ မခံဘူးပါဘူး, ေကာင္းပါတယ္ ” ဟု ေျပာကာ ကြ်န္မလည္း အက်ႌအကုန္လံုး ခြ်တ္ျပစ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ မ်က္လံုးက လႈပ္ရွားေနေသာ ကိုကိုယ့္ လက္ေခ်ာင္းေတြ ဆီ ေရာက္သြားေသာ အခါ ေျခာက္ လက္မေလာက္ရွည္ေသာ လီးညိဳညိဳႀကီးကို ေတြ႕မိသည္။ ကြ်န္မေယာက်ာ္း လီးႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္။
ကိုကိုယ့္လီးသည္ နဲနဲ ပိုရွည္မည္, လံုးပတ္ကေတာ့ တူတူေလာက္ဟု ထင္ရသည္။” ကဲ နီနီ ကိုယ့္တို႔ စခ်စ္ရစို႔ေနာ္ ဟု ေျပာကာ ကုတင္ေပၚ တက္လာၿပီး ကြ်န္မရဲ႕ ၿဖဲထားေသာ ေပါင္ၾကားတြင္ ထိုင္ကာ သူ႔လီးထိပ္ႀကီးျဖင့္ အရည္ရႊမ္းေနေသာ ကြ်န္မ ေစာက္ဖုတ္ကို ပြတ္ဆြဲၿပီး ကလိေနျပန္သည္။ ကြ်န္မလည္း ဖီးတက္လာကာ ကိုကိုလုပ္ပါေတာ့, ထည့္ေပးပါေတာ့ဟု ေျပာလိုက္ရာ ” ကဲ ထည့္ေတာ့မယ္ေနာ္ နီနီ နာရင္ေျပာေနာ္ , အဆင္မေျပရင္ေျပာ ” ဟု ဆိုကာ ကိုကိုယ္သည္ သူ႔လီးကို ေစာက္ပတ္ထဲ သို႔ ေျဖးေျဖးခ်င္းစထည့္ေလေတာ့သည္။ သြင္းလိုက္ထုတ္လိုက္လုပ္ရင္း ဆယ္မိနစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ နဲနဲခ်င္းပိုပိုသြင္းကာ အဆံုးနားထိေရာက္လာၿပီး သူ႔ကိုလံုးကို ကြ်န္မေပၚသို႔ ေမွာက္ကာ ကြ်န္မရဲ႕ နႈတ္ခမ္းေတြ, နားထဲေတြ, လည္ပင္းေတြ, ဂ်ိဳင္းၾကားေတြကို လွ်ာျဖင့္ ေလွ်ာက္ရက္ေပးရင္း လက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း ကြ်န္မႏို႔သီးမ်ားကို ဆုပ္နယ္ေပးေနသည္။
ေအာက္က လီးကလည္း ေျဖးေျဖးမွန္မွန္လုပ္ေပးေနရင္းမွ သြက္လာကာ အားပါလာသည္။ကြ်န္မလည္း ခံစားလို႔ေကာင္းလာကာ နႈတ္ခမ္းပါးေလးကို ကိုက္ေနမိသည္။ ” နာလို႔လား နီနီ, အရွိန္ေလ်ာ့ေပးရမလား ” ” ရတယ္ ကိုကို , စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ, မခံႏိုင္ရင္ ေျပာပါ့မယ္ ” ။ ကိုကိုမ်က္ႏွာ ျပံဳးသြားကာ ကြ်န္မကို အနမ္းေပးၿပီး အားပိုထည့္ကာ ဆကလုပ္ေလသည္။ ကြ်န္မ ေစာက္ပတ္သည္ ငါး ႏွစ္ခန္႔ သြင္းခံေနရေသာ ေယာက်ာ္း၏ လီးအတုတ္ႏွင့္ ဆိုဒ္တူေသာ ကိုကို႔လီးကို အက်ယ္အဝန္းက ခံႏိုင္ပါသည္, သို႔ေသာ္ ကိုကို႔ လီးသည္ တစ္ လက္မ ေက်ာ္ေလာက္ပိုရွည္သျဖင့္ ေဆာင့္ခ်က္အားပါေသာအခါတြင္ ေစာက္ေခါင္းထဲမွာ ေအာင့္သလိုလို, ေကာင္းသလိုလို ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ျဖစ္သြားသည္။ သံုးဆယ္ မိနစ္ခန္႔ ၾကာလာေသာအခါ ကြ်န္မလည္း ၿပီးခ်င္လာသျဖင့္ “။
ကိုကို သြက္သြက္ေလးလုပ္ေပးပါ, ကြ်န္မ ၿပီးေတာ့မယ္ , ဟုတ္ၿပီ ကိုကို ေဆာင့္ပါ… ေဆာင့္ပါ ” ဟုေျပာကာ ကြ်န္မလက္မ်ားျဖင့္ ကိုကို႔ ရဲ႕ဖင္ေတြေပၚကို ဆြဲဖိလိုက္, ပြတ္ေပးလိုက္ျဖင့္ ကိုကိုရဲ႕ေဆာင့္အားေကာင္းေအာင္ ကူေပးေနမိသည္။ ” အင္း….. အင္း…အင္း ” ဟုကြ်န္မ ပါးစပ္မွ ညည္းေနသလို ကိုကိုလည္း အသက္ရႉသံမ်ားျပင္းလာကာ ပါးစပ္ကလည္း ” ခ်စ္ေလး ေကာင္းလား…. ေကာင္းလား, ၿပီးရင္ ေျပာေနာ္ “ဟု ဆိုကာ အႀကိမ္ သံုးဆယ္ ခန္႔ အားအျပည့္ႏွင့္ေဆာင့္ေပးေနေတာ့သည္။ ” ၿပီးၿပီ ကိုကိုေရ , ေကာင္းတယ္, ခ်စ္သြားၿပီ ကိုကိုရာ ” ဟု ကြ်န္မလည္း ေျပာရင္း သူ႔ကိုယ္လံုးကို ဆြဲဖက္ကာ ကပ္ထားလိုက္သည္။ ကိုကိုလည္း ၿငိမ္ေနသည္, ကြ်န္မလည္း သူ႔ေက်ာျပင္ကိုပြတ္ေပးရင္း ” ကိုကို ေမာသြားၿပီလား, ေဘးလွိမ့္လိုက္ပါ, ညီမ ေရသြားခပ္ေပးမယ္ေနာ္ ……​ ျပီးပါျပီ။
ႏွဖူးထက္က ေခၽြးစေလးေတြကို လက္ခုံနဲ႔တို့သုတ္ရင္း ရွင္းလက္စအမွိုက္ေတြကို အမွိုက္ပုံးထဲ ထည့္လိုက္သည္ အရာရာ ေနရာတက်ရွိမရွိ ေဝ့ဝဲၾကည့္လိုက္ရင္း ေက်နပ္ဟန္ ျပဳံးသြားကာ အခုမွ စိတ္သက္သာသည့္ဟန္ႏွင့္ အမွိူက္ပုံးနား တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ခ်လိုက္သည္ ခန္႔ျငားသည့္ ကုတင္ႀကီးေပၚမွ ပန္းပြင့္အႀကီးႀကီးပုံေတြနဲ႔ ခင္းထားသည့္ ေမြ႕ယာ ဖက္လုံး ေခါင္းအုံး ေစာင္ အရာရာ စနစ္က်ျဖစ္သြားၿပီမို့ ကိုကို့အခန္းေလးက ေနခ်င္စဖြယ္ အသြင္ကိုေဆာင္ေနသည္ အိစက္သည့္ ဒီေမြ႕ယာေပၚမွာ ကိုကိုအိပ္မည့္ပုံစံေလးကို မ်က္လုံးေလးေမွးကာ ပုံေဖာ္ၾကည့္ရင္း ရွင္းသန္႔သည့္ မ်က္ႏွာေလးေပၚမွာ စြဲမက္ဖြယ္အျပဳံးေလး ရွပ္ေျပးသြားသည္…။ ျမေလး ဒီအိမ္ႀကီးကိုေရာက္တာ ၅ႏွစ္ပင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီမို့ ဒီအိမ္သားေတြနဲ႔ ျမေလးဆိုတာ မိသားစုဆိုလ်င္မမွား ဦးေဖႏွင့္ကိုကိုတို့ကပင္ ျမေလးကို အိမ္ေဖာ္(အိမ္ေပၚ)လို့မသုံး ဘယ္သူေမးေမး အိမ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ အရာသြင္းကာ တူမ ညီမစသည္ျဖင့္ ေျပာျပေလ့ရွိသည္….။ မွတ္မိေသးသည္ ေရာက္ခါစတုန္းက ျမေလးအသက္မွ […]
ရန္ကုန္တိုင္း အုတ္ဖို့ျမိဳ႕ေလးမွာ ကုန္းလမ္း ေရလမ္း ေပါက္ေရာက္သျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ အုတ္ဖို ျမိဳ႕စြန္ ရပ္ကြက္ေလးထဲ ! ဒို့ရိုးရာ … အရက္ဆိုင္ ! ေလးမွာ အနီးနား ရပ္ကြက္ေတြက အစ အကုန္သိေနျက၏။ အရက္ဆိုင္အား ဦးစီး လုပ္ကိုင္သူမွာ အသက္ ၃၄နွစ္ခန့္ သဲအိခိုင္ ဆိုေသာ မိန္းမေခ်ာတေယာက္ ျဖစ္သည္။ အရက္ျဖဴဆိုင္ ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္ ခ်က္ျပဳပ္ ေျကာ္ေလွာ္ထားေသာ အျမည္းစံုလင္စြာျဖင့္ ဘီယာနွင့္ ရႊမ္ပါ တြဲဖက္ေရာင္းခ် ေပး၏။ သဲအိခိုင္မွာ အိမ္ေထာင္သည္ တဦး ျဖစ္ျပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပါးနပ္သျဖင့္ အရက္ဆိုင္ေလးမွာ ေနည မျပတ္ အျမဲ စည္ကားေနေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ သဲအိခိုင္၏ လႈိင္းထေနေသာ နို့အံုမ်ားနွင့္ လမ္းေလ်ွာက္ လိုက္တိုင္း […]
ယနေ့မှာ အသက် (၂၇) နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ခင်ဝင့်ဝါ
တ ရှိုက် မက် မက် ခံ စား
လွတ်မြောက် နယ်မြေမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ရဲ့ အခြေအနေ
အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးဝါးနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပြေတီဦးတို့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပြန်လွတ်လာ သူတစ်ဦး
အနုပညာအလုပ်တွေ အတူတူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစံမိုးကို သွားရောက် ဂါဝရပြုခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်မိုးစက်
ခုလိုသီတင်းကျွတ်လေးမှာ အမေစုကို အရမ်းသတိရ လွမ်းနေတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါ
မျှော်လင့်ချက် ရိုက်ချိုးခံရတာ အရမ်းဆိုးပါတယ် ဆိုပြီး တီတီအူဝဲအတွက် ဝမ်းနည်းစဖွယ် ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ မေတိုးခိုင်
သီတင်းကျွတ်မှာ အဆိုတော်ဟဲလေးနဲ့ ရဲလေးတို့ကို သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ အစ္စဏီ